2011 | " မနာပဒါယီ "
မနာပဒါယီ အင်တာနက် ဓမ္မစာမျက်နှာမှ ကြိုဆိုပါ၏။ မနာပဒါယီဟူသည် “နှစ်သက်ဖွယ်ကိုဆောင်ခြင်း၊ နှစ်သက်ဖွယ်ကို ပေးလှူခြင်း”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ နှစ်သက်ဖွယ် အပေါင်းတို့တွင်လည်း ဓမ္မဖြင့် နှစ်သက်စေမှုသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်...
မေးဖြေပြီးသမျှ [Q / A]
ဝယဓမ္မာ သင်္ခါရာ အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ = ပြုပြင်ထားသည့် သင်္ခါရ တရားမှန်သမျှသည် ပျက်စီးခြင်းလျင် နိဂုံးရှိသဖြင့် မမေ့မလျော့သော သတိတရားဖြင့် ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပြည့်စုံကြလော့။
*ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ ကိုယ်ကဤပုံ ဖြစ်လိုတုံလည်း တစ်ဖုံဆင်ကွဲ သူတနဲဖြင့် ဖောက်လွဲတတ်စွာ ဓမ္မတာကို ပညာစက္ခု မျှော်ထောက်ရှု ၍ > ယခုပင်လျှင် မအိုခင်က ကြိုတင်ကောင်းမှု ကြိုးစားပြုလော့။ > ယခုပင်လျှင် မနာခင်က ကြိုတင်ကောင်းမှု ကြိုးစားပြုလော့။ > ယခုပင်လျှင် မသေခင်က ကြိုတင်ကောင်းမှု ကြိုးစားပြုလော့။ (ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာဘိဝံသ)
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း နှလုံးသွင်းမှာ၊ အချစ်များက အပြစ်များ၍၊ အမုန်းများက အရှုံးပွား၏။ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း ရှောင်ကြဉ်ကင်း၍၊ မေတ္တာနှလုံး ကျင့်ကာသုံးသည့်၊ အဖြူစင်ဆုံး ဤကျင့်ထုံးကား၊ အပြစ်လည်းကင်း အရှုံးကင်းမည့်၊ မချစ်မမုန်း အကောင်းဆုံးတည်း။
ဖုန်း = (၈၂) ၅၃-၂၄၆-၉၆၉၃။
ပါဠိ-အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရ အဘိဓာန်
။ အချိန် 12/24/2011 09:48:00 AM
စာရေးသူ = မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ(ဒိုက်ဦး)
ဘုန်းဘုန်းလည်း မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ပြီးကတည်းက တရားပွဲတွေ၊ ကျောင်းဆောက်နေတဲ့ အလုပ်တွေ၊ စာကြည့်တိုက် ဆောက်နေတာတွေကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်ကို မတက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားပါတယ်။ နဲနဲအားလို့ အွန်လိုင်းတက်ရင်လည်း ကွန်နက် မကောင်းတဲ့အတွက် မဝင်ဖြစ်တာပဲ များနေတတ်ပါတယ်။ ခုတော့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပဲ စောင့်ပြီးဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရောက်တုန်း ဟိုကြွဒီကြွ ကြွပြီး ဟောဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရားတွေထဲမှာ ကုသိုလ်ဘာကြောင့် လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ကိုတော့ အထူးပြုပြီး ဟောဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို အရင်းတည်ပြီး ဟောပေးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဒါလေးကို ပြောရတာလဲဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဝယဓမ္မာ သင်္ခါရာ အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ ပြုပြင်ထားတဲ့ သင်္ခါရ တရားမှန်သမျှ ပျက်ဆီးခြင်းသာ အဆုံးရှိတဲ့အတွက် မမေ့မလျော့တဲ့ သတိနဲ့ နေထိုင်ကြဆိုတဲ့ အမှာစကားလေးကို မကြာမကြာ သတိပြုရင်း နာမ်ရုပ်နှစ်ပါးနဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ သတ္တဝါတွေရဲ့ မမြဲခြင်းသဘောကိုပါ ဆင်ခြင်နေမိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မမြဲခြင်း သဘောရှိနေတဲ့အတွက် ဘဝမှာ အချိန်မရွေး၊ အရွယ်မရွေး ပျက်ဆီးခြင်း သဘောတွေကလည်း ကိုယ်တွေ့ကြုံနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေ သတ်မှတ်ထားကြသလို ပထမအရွယ်မှာ ပညာရှာ၊ ဒုတိယအရွယ်မှာ ဥစ္စာရှာ၊ တတိယအရွယ်မှာ တရားရှာဆိုတဲ့ ယေဘုယျ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိနေကြပေမယ့် ပညာရှာရင်း ပျက်ဆီးသွားကြသူတွေ၊ ဥစ္စာရှာရင်း ပျက်ဆီးသွားကြသူတွေ၊ တရားရှာရင်း တရားမရဘဲ ပျက်ဆီးသွားကြသူတွေကလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရှိနေကြတာဆိုတော့ ဘုန်းဘုန်းက ဒါလေးကို ဖြည့်စွပ်ပြီး အရွယ်တိုင်းမှာ လိုအပ်တာ ကုသိုလ်တရားပါလို့ ထပ်ပြောနေဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုသိုလ်မပါတဲ့ ဘဝဟာ မလှပနိုင်ဘဲ ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ဘဝလှဖို့အတွက် အရွယ်တိုင်းမှာ ကုသိုလ်လေးတွေ တတ်နိုင်သမျှ တွဲထားကြဖို့ တိုက်တွန်းနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေ ပြောပြောနေတဲ့ အရွယ်သတ်မှတ်ချက်လေးတွေကို ဘုန်းဘုန်းက ဖြည့်စွပ်ပြီး
" - ပထမအရွယ်မှာ ပညာရှာ
- ဒုတိယအရွယ်မှာ ဥစ္စာရှာ
- တတိယအရွယ်မှာ တရားရှာ
ဆိုပြီး တိုက်တွန်း နေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအရွယ်ကတော့ ရွေးချယ်စရာကို မရှိတော့တဲ့အတွက် တရားရှာရင်း တရားကိုပဲ ရအောင်ရှာရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ တရားရှာရင်း မတရား ရှာနေတာတွေ တွေ့တွေ့နေရတော့ ဒါတွေကိုလည်း တရားပဲ ရှာနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ ပြောနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထားပါတော့။ ပြောချင်တာက ဘဝဟာ အချိန်မရွေး ပျက်ဆီးနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ လက်ရှိအခိုက်အတန့်လေးမှာ ဘဝလှဖို့ ကုသိုလ်ပြုကြဖို့ ပြောလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသိုလ် ဘာကြောင့် လုပ်ရတာလဲ ဆိုရင် ဘဝလှဖို့ လုပ်ရတာလို့ပဲ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကုသိုလ်ဆိုတာ အကုသိုလ်လိုမဟုတ်ဘဲ လုပ်ပြီးယူမှသာ ရတတ်တဲ့အတွက် ကုသိုလ်ဘာကြောင့် လုပ်ရသလဲဆိုရင် လုပ်မှရလို့ လုပ်ရတာလို့ပဲ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘဝလှချင်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အရွယ်တိုင်းမှ အလှလေးတွေ ရှိစေဖို့ ကုသိုလ်ကိုသာ လုပ်ကြစို့လို့ ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 11/08/2011 11:29:00 PM
ရေးစရာတွေ ရှိနေပမယ့် လုပ်စရာတွေ ပိနေတဲ့အတွက်
မရေးအား၊ မတွေးအားတဲ့အပြင် အင်တာနက်ကိုလည်း အလေးမထားနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည်။
အလေးထားဖို့ တွန်းအားပို့ပေမယ့် မတွန်းနိုင်တဲ့ အင်တာနက် speedကြောင့် မကြည့်နိုင်ဘဲ မသိမသာပဲ ထားနေခဲ့ရသည်။
ခုတောင်မှ လူခြေတိတ်ချိန်မို့ မခို့တရို့နဲ့ ပို့နိုင်သလောက် ဟိုပို့ဒီပို့လုပ်ရင်း အင်တာနက် စာဖတ်ပရိတ် သတ်တွေကို အရိပ်အမြွက် နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်တော်ကထွက်ပြီး အပြန်ခရီးဆိုရင်တော့ အတိုးချထားတဲ့ အတွေးစတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့သမျှ
အတွေ့အကြုံ အဝဝကို ရသမျှနဲ့ စာပန်းချီခြယ်သပြဖို့ အချက်အလက် မှန်သမျှ မှတ်လို့ရသလောက် မှတ်ကျောက်လုပ်နေပါကြောင်း...
။ အချိန် 10/27/2011 02:05:00 PM
တစ်လောက နိုင်ငံခြားမှာနေထိုင် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ဆီက ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့ သူ့အသံကို သဲသဲကွဲကွဲ မကြားရဘဲ ရှိုက်ကြီးတစ်ငင် ငိုနေတဲ့ အသံကိုပဲ ဆက်တိုက်ကြားနေခဲ့ပါတယ်။ သိပ်ခံစားနေရတဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် ငိုသံလေးနည်းနည်း တိတ်သွားအောင် ဖုန်းကိုင်ပြီး စောင့်နားထောင်လိုက်ပါတယ်။ အားရပါးရ ငိုပြီးတော့မှ သူ့အသံက နည်းနည်း ပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် ခံစားနေရတာလဲ စသဖြင့် မေးခွန်းတွေ တစ်ခုခုပြီးတစ်ခု မေးကြည့်လိုက်တော့မှ အစ်မတော်ဟာ သူ့ကိုသူအားယူပြီး ရှိုက်သံသဲ့သဲ့နဲ့ သူ့အဖြစ်ကို ပြောပြရှာပါတယ်။ သူခံစားနေရတာတော့ ကြာပါပြီ။ ဘုန်းဘုန်းကို အပူပေးသလို ဖြစ်မှာဆိုးတာနဲ့ ဘာမှမပြောဘဲ နေခဲ့တာ ခုတော့ ဘယ်လိုမှကို မခံစားနိုင်တော့လို့ ဆက်လိုက်တာပါတဲ့လေ။
ဖြစ်ပုံက ထုံးစံအတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲပေါ့။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း မနာလိုကြရကာ သူ့ခမျာ တိုက်တာခိုက်တာ ခံနေရတဲ့ အဖြစ်ပါ။ ဆေးရုံမှာ အတူလုပ်ကြတဲ့ စီနီယာ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်က အစ်မတော်ရဲ့ ရာထူးတိုး စာမေးပွဲဖြေဖို့ ကိစ္စကို ဖြေလို့မရအောင် သူ့ကိုအမျိုးမျိုး အနှောက်အယှက် ပေးနေတယ်တဲ့လေ။ အနှောက်အယှက်ပေးတာကလည်း အစ်မတော် အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်မှာ စဝင်ဝင်ချင်းတုန်းက လူနာကို ဆေးမှားပေးခဲ့တဲ့ အမှားလေးကို ပြန်ဖော်ပြီး “အဲဒီတုန်းက ဒီလိုအဖြစ်တွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ရာထူးတိုးစာမေးပွဲဖြေဖို့ သူ့ကိုအခွင့် မပေးသင့်ကြောင်း” စသဖြင့် တာဝန်ရှိသူတွေကို ရှေ့တစ်မျိုး ကွယ်ရာတစ်ဖုံ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အစ်မကသူ့အပေါ်ကို ကောင်းသလောက် သူကအစ်မအပေါ် အဲဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်လာတာဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ မခံချိမခံသာအောင် ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း ဘုန်းဘုန်းကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစ်မပြောသမျှ စကားတွေကို အေးအေးဆေးဆေး နားထောင်ပြီး ဘုန်းဘုန်းမှာ သူ့အတွက် ပြေရာပြေကြောင်း စကားတွေ ပြောပြပေးရပြန်ပါတယ်။ ပြောဆိုတော့လည်း တရားစကား၊ တရားအားတွေနဲ့ ဘဝအားကို ဖြစ်စေမယ့် စကားတွေကိုပဲ ပြောပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းကတော့ ဘာသာတရား ရှုထောင့်ကပဲ သူ့ကို အနိုင်ယူဖို့ ပြောရပါတယ်။ “သူ့ကများများ တိုက်ခိုက်လေလေ ကိုယ့်က မေတ္တာများများ ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားလေ၊ အနှောက်အယှက် အတိုက်အခိုက်တွေ များလေလေ ဘုရားတရားအလုပ်ကို များများဖိလုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားလေ” စသဖြင့် နေထိုင်လေ့ကျင့်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း အစ်မကို ပြောပြပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အစ်မထံက ထွက်လာတဲ့ စကားက “တပည့်တော် အခုတစ်လော ဘုရားတရား အလုပ်ကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လုပ်နေရဲ့နဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေက ပိုတိုးလာတော့ ဘာသာတရားနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ ကံတရားအပေါ်မှာတောင် အယုံအကြည်တွေ နည်းလာသလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်”တဲ့လေ။
အစ်မတော်ရဲ့ အဲဒီစကားကို ကြားလိုက်ရတော့ ဘုန်းဘုန်းရင်ထဲမှာ အတော်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။ အစ်မတစ်ယောက် သူများရဲ့အတိုက်အခိုက်ကြောင့် ဘာသာတရား၊ ကံတရားတွေ အပေါ်အထိ သဒ္ဓါတရားတွေ နည်းလာနေပါတော့လားလို့ စဉ်းစားပြီး ဘုန်းဘုန်းမှာ အစ်မကို အကြေအလည် ဖြောင့်ဖျရပါတယ်။ “အစ်မအနေနဲ့ သူများရဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေမှာ တစ်ခါတောင်မဟုတ်ဘူး၊ နှစ်ခါတောင် ရှုံးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံတိုင်း ကိုယ်ကလိုက်ပြီးတုန်လှုပ် ခံစားနေမယ်ဆိုရင် တိုက်ခိုက်တဲ့သူရဲ့ ဗျူဟာဟာ အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကသူ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုအောက်ကို ရောက်လာနေကာ အလိုလို ရှုံးလာနေတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက သူများရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုနောက်ကို လိုက်ခံစားပြီး ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပါ သံသယတွေပွားပြီး သဒ္ဓါတရားတွေ လျော့နည်းတဲ့ အဖြစ်ဟာ တစ်ဖက်သူရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာ ကိုယ်ကအလူးအလိမ့်နဲ့ နှစ်ကြော့ပြန်အောင်ကို ရှုံးနေတာဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ထောက်ပြပြောဆိုပြီး “အခုအချိန်ကစပြီးတော့ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရှုံးမပေးဘဲ ရတနာသုံးပါးနဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလကို အထူးလုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းကာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ သူရဲ့မျက်နှာကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ရဲ့ရန်သူလို့ သဘောမထားဘဲ သတ္တဝါတွေထဲက သတ္တဝါတစ်ဦး အနေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်သာ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းကြည့်ဖို့၊ ပြီးတော့ ပြုခဲ့သမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီး သစ္စာပြုကာ အတိုက်အခိုက်များက မြန်မြန်ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ဖို့” သတိပေး တိုက်တွန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းပြောသမျှတွေကို နားထောင်ပြီး အစ်မတော်မှာ အတော်စိတ်သက်သာရာ ရသွားတယ်နဲ့တူပါတယ် အသံတွေ ကြည်လင်လာကာ နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်စကားဆိုပြီး ဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက် သုံးလေးရက်လောက်နေတော့ အစ်မဆီက ဖုန်းထပ်လာပါတယ်။ အခုသူ့ကို အထက်က ရထူးတိုး စာမေးပွဲဖြေဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ပြီတဲ့လေ။ ဒီတစ်ခေါက်ကြားရတဲ့ အစ်မတော်ရဲ့ အသံကတော့ ပြုံးရွှင်ကြည်လင်နေခဲ့ပါတယ်။ အစ်မဆီက ဖုန်းချသွားပြီးနောက်မှာတော့ ဘုန်းဘုန်းမှာ စာရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းတစ်ခု ရခဲ့ပါတော့တယ်။
ဟိုတစ်လောက လူမှုရေး လုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်နေတဲ့ ဒကာလေးတစ်ယောက်လည်း သူ့အပေါ် ပြောဆိုလာတဲ့ စကားတွေ၊ အတိုက်အခိုက်တွေကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာ မလုပ်တော့ဘဲ စိတ်ဓာတ်လေးတွေ လျော့နည်းလာတဲ့အဖြစ်နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ သူ့ကိုလည်း ဖြောင့်ဖျပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အတိုက်အခိုက်ဆိုတာက အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ မဖြစ်မနေ ကြုံကိုကြုံနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မလုပ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် လုပ်မိလို့ကတော့ လုပ်တဲ့အားနဲ့အမျှ တိုက်ခိုက်မှု အနှောက်အယှက်တွေကလည်း ရှိနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်တဲ့သူမပြောနဲ့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေတဲ့သူတွေကိုတောင် ပြောချင်တဲ့သူတွေက ဘာမှမလုပ်လို့ ပြောချင်ကြသေးတာဆိုတော့ လုပ်နေတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ အထူးပြောစရာကို မလိုတော့ပါဘူး။ နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေက ရှိကိုရှိနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးပဲ လာလာ မတုန်မလှုပ် ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကိုယ့်ဘက်က ပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လူ့လောကရဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေဆိုတာ လေတွေပါပဲ။ လေဆိုတာ တိုက်တဲ့အရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လေဟာပြင်ထဲကို ထွက်လာရင် လေရဲ့တိုက်တာကိုတော့ ခံကိုခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လေတိုက်တာခံရတဲ့ အခါမှာသာ ကိုယ်က ယိမ်းယိုင်ပြီး လဲမသွားအောင် ထိန်းနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေတိုက်ခံရတဲ့ အရာတွေကိုကြည့်ရင် အမြင့်မှာရှိတဲ့ အရာတွေက ပိုပြီးတိုက်တာ ခံရတဲ့ သဘောရှိသလို လောကကြီးမှာလည်း လုပ်ငန်းဆောင်တာ နေရာဌာန အမြင့်ကို ရောက်နေတဲ့သူတွေမှာ ပိုပြီးအတိုက်အခိုက်တွေ ခံရတတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ သစ်ပင်တွေမှာဆိုရင် ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ သစ်ရွတ်သစ်ခက်တွေဟာ တဖျပ်ဖျပ်နဲ့ အသံထွက်အောင် ပိုပြီးအတိုက်အခိုက် ခံရတတ်သလို လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်း သူ့အဆင့်နဲ့သူ အမြင့်ရောက်လာတဲ့ သူတွေမှာ ပိုပြီးအသံထွက်အောင် တိုက်ခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝပါပဲ။ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ နေရာဌာနလေးတွေမှာတောင် အချင်းချင်း အတိုက်အခိုက် ခံနေရတတ်တာဆိုတော့ နည်းနည်းဟုတ်တဲ့နေရာ၊ နည်းနည်းမြင့်တဲ့နေရာ၊ ဒီထက်ပိုပြီး ဟုတ်တဲ့မြင့်တဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် အထူးပြောစရာမရှိ တိုက်ခိုက်တာတွေက သေချာပေါက် ရှိနေကြမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကား တိုက်ခိုက်တတ်တာဟာ လေတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုက်တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားရမှာက အတိုက်အခိုက်ခံ သစ်ပင်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အလုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုက်အခိုက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲပြင်းပြင်း အကိုင်းအခက်တွေ မကျိုးမပဲ့အောင် စောင့်ရှောက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သစ်ပင်တွေလိုပေါ့။ သစ်ပင်တွေမှာ အပင်ကြီးတွေဟာ လေပြင်လေးညှင်းလေးတွေဆိုရင် ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ လေမုန်းတိုင်းတွေ တိုက်ခတ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ တင်းလွန်းအားကြီးရင်း နောက်တော့ အကိုင်အခက်တွေ ကျိုးပဲ့ကာ အမြစ်ပါ လန်သွားတာတွေကို သတိပြုမိရင် တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုင်းပင်လေးတွေကတော့ တိုက်လာတဲ့လေတွေအပေါ်မှာ အလိုက်သင့်လေးပဲ ယိမ်းထိုးပေးနေတဲ့အတွက် အကိုင်းအခက်ကျိုးတာတွေ မရှိဘဲ လေငြိမ်သွားတဲ့အခါ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ပြန်ထောင်နေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
လူ့လောက၊ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း ဒီလိုပဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်လာတဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေကို ကိုယ်က ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းတိုက်ခိုက်လာရင် နည်းနည်းလေးနဲ့ ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်လာရင်တော့ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကိုင်းအခက်တွေ မကျိုးမပဲ့အောင် တိမ်းရင်းရှောင်းရင်း ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းလေးနဲ့ ခံနိုင်ရည် ရှိအောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုက်အခိုက်တွေကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ အတိုက်အခံအားအပေါ်လိုက်ပြီး တစ်ခါတလေ ကိုယ်ပဲကျိုးပဲ့ သွားတတ်တာတွေ ရှိတဲ့အတွက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို တန်ပြန်ပြီး တိုက်ခိုက်တာထက် တိုက်ခိုက်လာသမျှကို မယိမ်းမယိုင် ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားတာက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများကိုလည်း မတိုက်ခိုက်ဘဲ ကိုယ့်ထံရောက်လာတဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေမှာလည်း ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး နေထိုင်လေ့ကျင့်တာဟာ အတိုက်အခိုက် လောကဓံကို ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုက်အခိုက် လောကဓံတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်မှာလက်နက်တွေ အပြည့်ဖြည့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ လောကကြောင်းအရ ဖြည့်သင့်ဖြည့်ထိုက်တဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာတွေ ဖြည့်ထားဖို့ လိုသလို ဓမ္မကြောင်းအရလည်း ကိုယ့်ကျင့်သီလတွေ၊ သမာဓိအကျင့်တွေ၊ ပညာအကျင့်တွေကိုလည်း အားဖြည့်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလတရား၊ သဒ္ဓါတရား၊ ပညာတရား၊ ဝီရိယတရားလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင် အမြဲမရှိတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ အလွဲမရှိဘဲ ယှဉ်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ကြမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တိုက်တတ်တဲ့ လေကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ လူတွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါ လေတိုက်တိုင်း မယိမ်းဘဲ ခံနိုင်တဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလည်း အလိုက်သင့် ရှောင်တိမ်းတတ်တဲ့ သစ်ပင်လေးတွေလို လူအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်မှု အမျိုးမျိုးကို ခံရတတ်တဲ့ လူတွေအနေနဲ့လည်း တစ်ချို့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ မယိမ်းယောင်အောင် ကြိုးစားပြီး တစ်ချို့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလည်း အလိုက်သင့် ရှောင်တိမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျိုးမပဲ့အောင်သာ အသိ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ဝီရိယ စသည်များနဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး တင်ပြလိုက်ရင်း တိုက်ခိုက်မှု မှန်သမျှ မယိမ်းမယိုင် သတိခိုင်ခိုင် ထားကြဖို့ စေတနာထား မေတ္တာအားဖြင့် သိသမျှနဲ့ အသိမျှလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 10/25/2011 07:11:00 AM
ဤလောက၌ ပုထုဇင် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ မှန်သမျှသည် သေရမည်ကို ကြောက်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း သေရမည့်ဘေးနှင့် ကြုံကြသည့်အခါ လွတ်ရာလမ်းကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုးစားရှာဖွေကြခြင်း ဖြစ်၏။ အသက်ရှင်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အားထုတ်ကြ၏။ သေဘေးနှင့် မကြုံရအောင် အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ရေး နည်းလမ်းကို ရှာဖွေကြ၏။ အစာမစားလျှင် သေရမည်ကို ကြောက်ကြသဖြင့် အစာစားကြ၏။ ရေမသောက်လျှင် သေမည်စိုးသဖြင့် ရေသောက်ကြ၏။ ရောဂါကြောင့် သေမည်ကို ကြောက်ကြသဖြင့် ရောဂါမဖြစ်အောင်၊ ဖြစ်လာလျှင်လည်း ပျောက်ကင်းသက်သာအောင် အားထုတ်ကြ၏။ မှန်၏။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် ခြေလက်အင်္ဂါတစ်ခုခု ယှဉ်လာလျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာကို စွန့်၍ ခြေလက်အင်္ဂါကို ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်၏။ ခြေလက်အင်္ဂါတို့နှင့် အသက်ယှဉ်လာလျှင် ခြေလက်အင်္ဂါတို့ကို စွန့်၍ အသက်ကို ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်၏။ မသေဘူးဆိုလျှင် အသက်ကလွဲ၍ ကျန်သည့်အရာများကို စွန့်လွတ်ရန် ၀န်မလေးတတ်ကြပေ။ ဤသည်တို့မှာ သေရမည်ကို ကြောက်ကြသောကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။ သာမန်သူများ မဆိုထားဘိ လောကတွင် ဒုက္ခအမျိုးမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့ရသဖြင့် မခံစားနိုင်ဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးစားကြသည့် သူများပင်လျှင် လက်တွေ့သေကြရမည် ဆိုသောအခါ ကြောက်လန့်မှု ဖြစ်ကြသေး၏။
ကြားဖူးသည့် ပုံပြင်လေး တစ်ခုရှိ၏။ ရှေးတုန်းက ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် အလွန်ဒုက္ခဆင်းရဲ ဖြစ်သဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဆွဲကြိုးချသေရန် ကြိုးစားသည့် သူတစ်ယောက်ရှိ၏။ တစ်နေ့ ထိုသူသည် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးအရှည်တစ်ချောင်းကို ယူကာ ရွားထိပ်က သစ်ပင်ကြီးရှိရာ အရပ်သို့ သွား၏။ သစ်ပင်ရှိရာသို့ ရောက်သည့်အခါ ကြိုးတစ်စကို သစ်ပင်၏သစ်ကိုင်း တစ်ခုတွင် ချည်ပြီး ကျန်တစ်စကို မိမိ၏ လည်ပင်းတွင် ချည်ကာ သစ်ပင်ပေါ်မှ ခုန်ချလေ၏။ သို့သော် မည်သို့ပင် ကြိုးစားကြိုးစား ဘာမျှမဖြစ်ဘဲ အသက်ရှင်လျှက်သာရှိ၏။ စင်စစ် ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ သူ၏ကြိုးမှာ သစ်ကိုင်းနှင့် မြေကြီးထက်နှစ်ဆလောက် ရှည်နေသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ခုန်ချတိုင်း ကြိုးစက မြေကြီးပေါ်တွင် ပုံလျက်သားဖြစ်ကာ မသေခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအချင်းအရာကို မြင်းစီးပြီး တစ်နေရာသို့ ခရီးသွားသည့် သူတစ်ယောက်က တွေ့ကာ ``ဟေ့လူ… ဘာလုပ်နေတာလဲ`` ဟု မေး၏။ ထိုအခါ သစ်ပင်ပေါ်မှ သူက ``ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်မှန်း မသိ၊ သေလို့ကို မရဘူးဖြစ်နေတယ်``ဟု ပြန်ပြော၏။ ထိုအခါ ခရီးသွားက အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ``ဟာ… ခင်ဗျားနှယ်… အ ရန်ကော… ခင်ဗျားလုပ်တာက ဟုတ်မှမဟုတ်ဘဲ… လာဆင်းခဲ့ ကျွန်တော်ပြမယ် သေသေချချာကြည့်`` ဟု ဆိုကာ သေကြောင်းကြံမည့် သူဆီမှ ကြိုးကိုယူပြီး သူကိုယ်တိုင် သစ်ပင်ပေါ်တက်သွားကာ အောက်ကလူကို ``ဟေ့လူ… ဒီမှာ ကျုပ်ပြမယ် သေသေချချာကြည့်.. ခင်ဗျားဟာက ကြိုးရှည်နေလို့ ဖြစ်တာ၊ ကြိုးကို ဒီလိုတိုအောင် ဖြတ်၊ ပြီးရင် ဒီလို လည်ပင်မှာ ချည်ပြီး ဒီလိုခုန်ချရတယ်..`` ဟု ဆိုကာ သူ့လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းစွပ်ကာ သူကိုယ်တိုင် ခုန်ချပြလိုက်၏။ အပြကောင်းသည့် ခရီးသွားကား တစ်ခါတည်း မိမိကိုယ်ကို မိမိသတ်သေပြီး ဖြစ်သွားလေ၏။ ထိုအခြင်းအရာကို မြင်သည့်အခါ အမှန်တကယ် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးစားသည့် ရွာသားမှာ အလွန်အမတန် ကြောက်လန့်ပြီး ``ဟာ… သေတာဟာ ကြောက်စရာကြီးပါလား…`` ဟု ရေရွတ်ပြီး မသေရဲတော့ဘဲ ကြောက်အားလန့်အား ရွာထဲပြန်ဝင် ပြေးသွားလေ၏။ ဤပုံပြင်လေးသည် ဟာသဆန်ဆန် ပုံပြင်လေးဖြစ်သော်လည်း တစ်ဘက်က ကြည့်ပါက အမှန်တကယ် သေချင်ကြသည့် သူများပင်လျှင် လက်တွေ့သေရမည် ဆိုသောအခါ ကြောက်လန့်တတ်ကြကြောင်း သွယ်ဝိုက်ပြီး နားလည်သဘောပေါက်နိုင်၏။ ထို့ကြောင့် သေရမည်ကို မကြောက်သည့်သူ မရှိဟု ပြောဆိုကြခြင်း ဖြစ်၏။
သို့သော် သေမှာမကြောက်သူများသည် အမှန်ပင်ရှိ၏။ မည်သို့သော သူများသည် သေမှာမကြောက်ကြကြောင်း ဗုဒ္ဓစာပေတွင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားတော်မူထားသည်များ ရှိ၏။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ စတုက္ကနိပါတ် ပါဠိတော် အဘယသုတ်တွင် သေမှာမကြောက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက် ရှိကြောင်း မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူထား၏။ ဤတရားတော်သည် ဇာဏုေဿာဏီ အမည်ရှိသော ပုဏ္ဏားကြီး၏ မေးမြန်းလျှောက်ထားချက်ကို မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ ဖြေကြားဟောထားခြင်းဖြစ်၏။ ဤအဘယသုတ်တွင် သေမှာကြောက်သည့်သူများ နှင့် သေမှာ မကြောက်သည့် သူများကို ဟောတော်မူထားသော်လည်း ဤနေရာတွင် သေမှာမကြောက်သူများကိုသာ တင်ပြလိုပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သေမှာမကြောက်သူများကို တင်ပြလိုက်ကာမျှဖြင့် အပြန်အားဖြင့် သေမှာကြောက်သည့် သူများကိုလည်း အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။
``- ပုဏ္ဏား… ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် ကာမဂုဏ်တို့၌ ရာဂကင်း၏။ ဆန္ဒကင်း၏။ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကင်း၏။ မွတ်သိပ်ခြင်းကင်း၏။ ပူပန်ခြင်းကင်း၏။ တဏှာကင်း၏။ ထိုသူသို့ ပြင်းပြသော ရောဂါအနာ တစ်မျိုးမျိုး ကျရောက်သောအခါ ``ချစ်ခင်ဖွယ် ကာမဂုဏ်တို့သည် ငါ့ကိုဧကန် စွန့်ကြလိမ့်မည်၊ ငါသည်လည်း ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ ကာမဂုဏ်တို့ကို စွန့်ရတော့မည်``ဟု (မိမိကိုယ်ကို) အကြံမဖြစ်။ မစိုးရိမ်။ မပင်ပန်း။ မငိုကြွေး။ ရင်ဘက်စည်တီး မမြည်တမ်း။ ပြင်းစွာတွေဝေခြင်းသို့ မရောက်။ ပုဏ္ဏား… သေခြင်းသဘောရှိသည် ဖြစ်လျက် သေခြင်းမှ မကြောက်သော၊ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ မရောက်သော သူဟူသည် ဤသူပင်တည်း။
- ပုဏ္ဏား… နောက်တစ်မျိုးကား.. ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် ကိုယ်၌ ရာဂကင်း၏။ ဆန္ဒကင်း၏။ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကင်း၏။ မွတ်သိပ်ခြင်းကင်း၏။ ပူပန်ခြင်းကင်း၏။ တဏှာကင်း၏။ ထိုသူသို့ ပြင်းပြသော ရောဂါအနာ တစ်မျိုးမျိုး ကျရောက်သောအခါ ``ချစ်ခင်ဖွယ် ကိုယ်သည် ငါ့ကိုဧကန် စွန့်ကြလိမ့်မည်၊ ငါသည်လည်း ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ ကိုယ်ကို စွန့်ရတော့မည်``ဟု (မိမိကိုယ်ကို) အကြံမဖြစ်။ မစိုးရိမ်။ မပင်ပန်း။ မငိုကြွေး။ ရင်ဘက်စည်တီး မမြည်တမ်း။ ပြင်းစွာတွေဝေခြင်းသို့ မရောက်။ ပုဏ္ဏား… သေခြင်းသဘောရှိသည် ဖြစ်လျက် သေခြင်းမှ မကြောက်သော၊ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ မရောက်သော သူဟူသည် ဤသူပင်တည်း။
- ပုဏ္ဏား… နောက်တစ်မျိုးကား.. ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် မကောင်းမှုကို မပြု။ ကြမ်းကြုတ်မှုကို မပြု။ ညစ်နွမ်းမှု အကုသိုလ်ကို မပြု။ ကောင်းမှုကို ပြုပြီးဖြစ်၏။ ကုသိုလ်ကို ပြုပြီးဖြစ်၏။ ကြောက်မက်ဖွယ်မှ တားမြစ်ရေးကို ပြုပြီးဖြစ်၏။ ထိုသူသို့ ပြင်းပြသော ရောဂါအနာ တစ်မျိုးမျိုး ကျရောက်သောအခါ ``ငါသည် မကောင်းမှုကို မပြု၊ ကြမ်းကြုတ်မှုကို မပြု၊ ညစ်နွမ်းမှုကို မပြု၊ ကောင်းမှုကို ပြုပြီးပြီ၊ ကုသိုလ်ကို ပြုပြီးပြီ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်မှ တားမြစ်ရေးကို ပြုပြီးပြီ၊ အချင်းတို့ စင်စစ် မကောင်းမှုကို မပြုသော၊ ကြမ်းကြုတ်မှုကို မပြုသော၊ ညစ်နွမ်းမှုကို မပြုသော၊ ကောင်းမှုကို ပြုပြီးသော၊ ကြောက်မက်ဖွယ်မှ တားမြစ်ရေးကို ပြုပြီးသော သူတို့၏ လားရာဂတိ ဟူသမျှသို့ ဘ၀နောင်ခါ ငါလားရတော့အံ့ တကား``ဟု (မိမိကိုယ်ကို) အကြံဖြစ်၏။ ထိုသူသည် မစိုးရိမ်၊ မပင်ပန်း၊ မငိုကြွေး၊ ရင်ဘက်စည်တီး မမြည်တမ်း၊ ပြင်းစွာတွေဝေခြင်းသို့ မရောက်။ ပုဏ္ဏား… သေခြင်းသဘောရှိသည် ဖြစ်လျက် သေခြင်းမှ မကြောက်သော၊ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ မရောက်သော သူဟူသည် ဤသူပင်တည်း။
- ပုဏ္ဏား… နောက်တစ်မျိုးကား.. ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် သူတော်ကောင်းတရား၌ မယုံမှား။ ဝေခွဲနိုင်၏။ ဆုံးဖြတ်နိုင်၏။ ထိုသူသို့ ပြင်းပြသော ရောဂါအနာ တစ်မျိုးမျိုး ကျရောက်သောအခါ ``ငါသည် စင်စစ် သူတော်ကောင်းတရား၌ မယုံမှား၊ ဝေခွဲနိုင်၏၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်၏``ဟု (မိမိကိုယ်ကို) အကြံဖြစ်၏။ ထိုသူသည် မစိုးရိမ်၊ မပင်ပန်း၊ မငိုကြွေး၊ ရင်ဘက်စည်တီး မမြည်တမ်း၊ ပြင်းစွာတွေဝေခြင်းသို့ မရောက်။ ပုဏ္ဏား… သေခြင်းသဘောရှိသည် ဖြစ်လျက် သေခြင်းမှ မကြောက်သော၊ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ မရောက်သော သူဟူသည် ဤသူပင်တည်း။ ပုဏ္ဏား… သေခြင်းသဘောရှိသည်ဖြစ်လျက် သေခြင်းမှ မကြောက်သော၊ ထိန်လန့်ခြင်းသို့ မရောက်သော သူတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း`` ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အထက်ပါ ဟောကြားချက်တွင် မြတ်ဗုဒ္ဓမှ သေမှာ မကြောက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကို ခွဲခြားဟောကြားတော် မူထားသည်ကို ဖတ်ရှုကြည်ညိုနိုင်ကြမည် ဖြစ်၏။ ထိုဟောကြားချက်ကို အနှစ်ချုပ် အလွယ်နားလည်အောင် ကောက်ချက်ချပြရလျှင် သေမှာ မကြောက်သူတို့ဟူသည်
၁။ ကာမဂုဏ်တို့၌ တပ်မက်မှုရာဂ၊ တွယ်တာမှုသံယောဇဉ်၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပူပန်ခြင်း ကင်းသောသူ
၂။ ခန္ဓာကိုယ်၌ တွယ်တာနှစ်သက် တပ်မက်မှုတဏှာ ကင်းသောသူ
၃။ မကောင်းမှု အကုသိုလ်ကို မပြု၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပြုပြီးသောသူ
၄။ သူတော်ကောင်းတရား၌ ယုံမှားသံသယ မရှိသောသူ ဟူသော ဤလေးမျိုးတို့ပင် ဖြစ်ပါ၏။
မှန်၏။ စင်စစ် လူ့ဘ၀တွင် နေသည့်အခိုက် ကာမဂုဏ်အာရုံများ နောက်သို့သာ လိုက်နေကြသူများ၊ ``ငါ၊ င့ါခန္ဓာ``ဟု စွဲလမ်းတပ်မက်မှု ရှိနေကြသူများ၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှု မရှိ အကုသိုလ်များဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေကြသူများ၊ သူတော်ကောင်းတရားကို မသိနားမလည်သူများသည် သေခါနီးအခါကာလတွင် မိမိတို့ ဘ၀သံသရာအတွက် အားကိုးအားထားပြုစရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိသည့်အတွက် သေရမည်ဆိုသည့်အခါ ကြောက်ကြခြင်းဖြစ်၏။ အပြန်အားဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့်အခိုက် ကာမဂုဏ်အာရုံများ နောက်သို့မလိုက်သူ၊ ငါ၊ ငါ့ခန္ဓာဟု တပ်မက်စွဲလမ်းမှု မရှိသူ၊ အကုသိုလ်ကိုပြုခြင်းမရှိ ကုသိုလ်များဖြင့်သာနေသူ၊ သူတော်ကောင်းတရားကို သိရှိနားလည် လိုက်နာကျင့်ကြံနေသူများ အတွက်ကား မိမိတို့သံသရာအတွက် ရိက္ခာအပြည့်ထုတ်ပြီး ဖြစ်သဖြင့် ယခုဘ၀သေရမည့် အရေးတွေးပြီး ကြောက်စရာမလိုကြခြင်း ဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် မဟုတ်သည့်အရာများ၊ မကောင်းသည့်အမှုများကို ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိကြသည့်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိနေပြီး မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ မည်သို့သော အရာမျိုးကိုမှ ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မှု မရှိနိုင်တော့ပေ။
ထို့အပြင် သေခြင်းတရားနှင့် ပတ်သက်၍ ဓမ္မပဒ၊ အပ္ပမာဒ၀ဂ်၊ သာမာဝတီဝတ္ထုတွင် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူထားသည့် တရားတစ်ပုဒ်ကိုလည်း သတိရမိ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓက သာမာဝတီကို အကြောင်းပြု၍ အောက်ပါဂါထာ တစ်ပုဒ်ဖြင့် သတိပေးစကား ဟောကြားခဲ့၏။
``အပ္ပမာဒေါ အမတံ ပဒံ၊ ပမာနော မစ္စုနော ပဒံ၊
အပ္ပမတ္တာ န မီယန္တိ၊ ယေ ပမတ္တာ ယထာ မတာ။`` ဟူသော ဤတရားဂါထာ၏ ဆိုလိုရင်းမှာ ``မမေ့လျှော့ခြင်းသည် သေခြင်းကင်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပြီး မေ့လျှော့ပေါ့ဆခြင်းသည် သေခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ မမေ့မလျှော့ နေကြသူများသည် သေခြင်းကင်းသူများနှင့် တူကုန်ပြီး မေ့မေ့လျှော့လျှော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေကြသူများသည် အသက်ရှင်နေသော်လည်း သေနေကြသူများနှင့် တူကြကုန်၏။`` ဟူ၍ဖြစ်၏။
ဓမ္မပဒလာ ထိုတရားစကားသည် မြတ်ဗုဒ္ဓနေ့စဉ် မိန့်တော်မူနေကြဖြစ်သည့် အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ - မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆသော သတိတရားနှင့် ပြည့်စုံအောင်နေကြ ဟူသော မိန့်မှာချက်ကို ထပ်ဆင့်အထူးပြု သတိပေးထားသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဤမိန့်မှာချက်ကို ဆက်စပ်ယူလိုက်လျင် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် သေမှာမကြောက်သူများ ပြည့်စုံရမည့် အချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူများအား မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆ နေကြသူများအဖြစ် ညွှန်ပြနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သေမှာမကြောက်သူများဟူသည် သတိရှိကြသူများပင်တည်းဟု ကောက်ချက်ချနိုင်မည် ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် လောကတွင် သေရမည်ကို လူတိုင်းကြောက်ကြသည် ဆိုသော်လည်း သေမှာမကြောက်သည့် သူများလည်း ရှိသည်ကို အထက်ဖော်ပြပါ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောတော်မူချက်များက သက်သေပြုနေပြီး ဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့ ယခုလက်ရှိဘ၀တွင် သေခြင်းတရားကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်၊ သေရမည့်အရေး တွေးကြောက်စရာ မလိုသည့် သေမှာမကြောက်သူများ ဖြစ်စေရန် အချိန်ရှိခိုက် သတိစိုက်၍ ကြိုးစားကြရန်သာ လိုအပ်ပေတော့၏။ ထိုသို့ ကြိုးစားကြရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သေခြင်းတရားဟူသည် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ အရွယ်မရေး ဧကန်မုချ လာနိုင်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
။ အချိန် 10/22/2011 08:05:00 AM
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ စောင့်ထိန်းကြတဲ့ သီလကို ကိုယ်ကျင့်သီလလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးလေးဟာ အဓိပ္ပါယ် သိပ်လေးနက်ပါတယ်။ “ကိုယ်ကျင့်သီလ”တဲ့။ ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်ကျင့်မှ ကိုယ်ရမှာကိုး။ ကိုယ်မကျင့်ဘဲ ဘုရားရှေ့မှာ ဘယ်လောက်ပဲ သီလတွေယူယူ၊ ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ဘယ်လောက်ပဲ သီလတွေပေးပေး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မကျင့်ရင် ပါးစပ်ပေးပေးပြီး၊ ပါးစပ်ယူ ယူတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာ နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနိဗ္ဗာန်ကို သွားဖို့အတွက် အခြေခံ လှေခါးကတော့ သီလပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်အဆုံးအမတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ သူတွေဟာ ဒီနိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားအဆုံးအမဆိုတာ တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်ကိုပဲ ပြောတာပါ။ ဒီသိက္ခာသုံးရပ်ကို မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပဲလို့ အလွယ်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟာ နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော လမ်းဖြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းမှာ သီလတည်မှု၊ သမာဓိရှိမှု၊ ပညာပြည့်မှုတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ သီလတည်မှ သမာဓိတည်နိုင်ပြီး၊ သမာဓိတည်မှလည်း ပညာရနိုင်ပါတယ်။ ဒီသုံးမျိုးလုံးဟာ တစ်ခုတည်း၊ တစ်စပ်တည်းပါး။ ဒါကြောင့် သုံးမျိုးလုံးပေါင်းပြီး တစ်ကြောင်းတည်းသော လမ်းအဖြစ်ရှိနေတာပါ။ အရေအတွက်အားဖြင့် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးလို့ ပြောပေမယ့် အချုပ်အားဖြင့် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာပါပဲ။ ဒါကို သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်လို့ပြောနိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ အနှစ်ချုပ်လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ဒီလို ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမတွေ တည်နေဖို့အတွက် ဆုတောင်းနေလို့ မရပါဘူး။ တည်အောင်ကျင့်ယူမှ ရပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကျင့်ယူရပါတယ်။ အဲဒီလိုကျင့်တဲ့အခါ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့် သီလကို အရင်ဆုံးလုံခြုံအောင် ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် သီလဟာ အခြေခံ အကျဆုံးဖြစ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလမလုံခြုံပဲ အထက်လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ဘာဝနာ အလုပ်တွေ လုပ်နေလို့ကတော့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ဆုံးမသလို “အပေါ်ပိုင်းကတော့ တိုက်ပုံအင်္ကျီ၊ ခေါင်းပေါင်းစ တလူလူနဲ့ အောက်ပိုင်းကျတော့ ပုဆိုးမပါတဲ့သူ“ လိုပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အောက်ပိုင်းလုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းစေဖို့ ငါးပါးသီလဟာ ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မြဲနေရမယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သီလဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက် ဒီသီလကို စောင့်ထိန်းကြဖို့ ဆရာသမားများက အမြဲဆုံးမလေ့ ရှိပါတယ်။ ဆုံးမတဲ့အခါမှာလည်း ဥပမာလေးများပေးပြီး ဆုံးမလေ့ရှိပါတယ်။ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေကို ပြပြီးလည်း ဆုံးမလေ့ရှိပါတယ်။ သီလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုံးမကြတဲ့ ဆုံးမမှုတွေထဲက ပထမရွှေကျင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သိဿကောဝါဒ ဆုံးမစာမှာ ဆုံးမထားတဲ့ သီလဆိုင်ရာ အဆုံးအမတွေကတော့ ဥပမာဥပမေယျ စုံလင်လှပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အဆုံးအမလေးများကို တစ်ဆင့်မျှဝေရင်း ကိုယ်ကျင့်သီလဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးရယူကြဖို့ ထပ်မံ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
”ဗီလုံးငှက်သော်လည်း ကျွဲခြေရာခွက်ကို အမှီရလျှင် ဂဠုံနှင့်တူ၏၊ အန္တရာယ်မရှိ။
ပုထုဇဉ်သော်လည်း သီလရှိလျှင် အရိယာနှင့်တူ၏၊ အပါယ်မရောက်။
ရေရှိမှ ကြာပွားသည်၊ သီလရှိမှ သမာဓိများသည်။
ဗဟုသုတရှိလျက် သီလမရှိလျှင် ရေမတည်သော ကန်နှင့်တူ၏။
ပညာရှိလျက် သီလမရှိလျှင် အသီးမရှိသော သစ်ပင်နှင့်တူ၏။
စာပေပို့ချနိုင်လျက် သီလမရှိလျှင် အသီးမချိုသော သစ်ပင်နှင့်တူ၏။
တရားဟောကောင်းလျက် သီလမရှိလျှင် အနံ့မမွှေးသော ပန်းနှင့်တူ၏။
ကျမ်းဂန်တတ်လျက် သီလမရှိလျှင် အဆိပ်သီးပင်နှင့်တူ၏။
ဘုန်းကြီးလျက် သီလမရှိလျှင် အနှစ်မရှိသော သစ်ပင်နှင့်တူ၏။
သီလရှိမှ ဒါနနှင့်ဘာဝနာ အကျိုးပေးသန်၏။
ပင်လယ်ကူးလိုလျှင် လှေသင်္ဘောတည်၊ နတ်ပြည်တက်လိုလျှင် သီလလှေကားထောင်။
အကုသိုလ်သည် သတ္တ၀ါကို အပါယ်ဆွဲချ၏၊ သီလရှိသူကို မဆွဲချနိုင်။
ပင်လယ်ကူးလိုလျှင် သင်္ဘောလုံအောင်ဖာ၊ သံသရာကူးလိုလျှင် သီလလုံအောင်ဖာ။
လောကီဥစ္စာစောင့်လျှင် တစ်သက်ချမ်းသာ၏၊ သီလစောင့်လျှင် ဘ၀အဆက်ဆက်ချမ်းသာ၏။
ဆီမီးသည် လင်းခိုက် လူလယ်တင့်၏၊ ငြိမ်းလျှင်မှောင်၏၊ ညှော်နံ့ထွက်၏။
သီလသည် စောင့်ထိန်းခိုက် လူလယ်တင့်၏၊ ပျက်လျှင်မှောင်၏၊ ညှော်နံ့ထွက်၏။ ”
အထက်ပါ သီလဆိုင်ရာ အဆုံးအမများမှာ ပထမရွှေကျင် ဆရာတော်ကြီး၏ အဆုံးအမ တစ်စိတ်တစ်ဒေသပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီး၏ အဆုံးအမများကိုကြည့်လျှင် သီလရဲ့ အရေးပါမှုကို အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံဖြစ်တဲ့ သီလမလုံခြုံလျှင် ကျန်တဲ့ဒါနဘာဝနာ အလုပ်များမှာ အကျိုးပေးအားနည်းပြီး နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေတတ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် အတွက် အခြေခံဖြစ်တဲ့ ငါးပါးသီလလောက်တော့ လုံခြုံမှကို ဖြစ်မှာပါ။ နိဗ္ဗာန်မရသေးတာတောင် ဘ၀ကူးကောင်းဖို့၊ သံသရာခရီးမှာ အပါယ်မလားဖို့ အနည်းဆုံး ငါးပါးသီလလောက်တော့ လုံခြုံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သီလမလုံခြုံပဲ ဒါနတွေ ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်လုပ်အပါယ် တံခါးပိတ်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ဒါနဟာ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ချမ်းသာမှု သက်သက်ကိုသာ အကျိုးပေးနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ သီလမလုံခြုံပဲ ဘာဝနာ အားထုတ်နေရင်လည်း သမာဓိတည်ဖို့ ခဲရင်းသလို သမာဓိ မတည်ရင်လည်း အထက်မဂ်ဉာဏ်ကို ရဖို့ခဲရင်းလှပါတယ်။ အချုပ်ကြည့်ရင် ဒါနအကျိုးပေးသန်ဖို့နဲ့ ဘာဝနာဉာဏ်တွေမြင့်ဖို့ သီလသည်သာ ပဓာနကျတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ၊ ကိုယ်လုပ်ကိုယ်စံ၊ ကိုယ်ကျင့်ကိုယ်ရဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကိုယ့်ဘ၀ အတက်အကျ အရှုံးအနိမ့်ကို ဖန်တီးနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ ချမ်းသာစေတတ်တဲ့ ဒီသီလကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရယူနိုင်အောင် ကိုယ်ကျင့်သီလရဲ့ အရေးပါမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်များအတွက် သတိပေးရင်း ပုဆိုးထမီလုံအောင် ၀တ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 10/20/2011 02:46:00 PM
သူတစ်ယောက်မှာ၊ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်း။
ခွင့်လွှတ်ပေး၏။ သွေးသည် အနိစ္စာ ငါ့ခန္ဓာတည်း။"
စာရေးသူ စာသင်သား ဘဝကတည်းက မကြာမကြာ ဆိုလေ့ရှိသည့် ကဗျာအပိုင်းအစလေးမှာ “သူတည်းတစ်ယောက်၊ ကောင်းဖို့ရောက်မူ၊ သူတစ်ယောက်မှာ၊ ပျက်လင့်ကာသာ၊ ဓမ္မတာတည်း” ဟူသော အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီး၏ မျက်ဖြေလင်္ကာလေးမှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသပင် ဖြစ်၏။ လက်တွေ့အားဖြင့်လည်း လောကတွင် တစ်စုံတစ်ယောက် ကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပျက်စီးသွားကြသည့် အဖြစ်အပျက်လေးများကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေဖူးသဖြင့် ထိုအဖြစ်အပျက်လေးများကို သတိရတိုင်း ထိုကဗျာအပိုင်းအစလေးကို ရေရွတ်မိတတ်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ စာရေးသူကား ထိုအပိုင်းအစလေးကိုသာ လိုရာဆွဲယူ အသုံးပြုထားသော်လည်း ထိုကဗျာလင်္ကာ တစ်ပုဒ်လုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ နက်ရှိုင်းလှ၏။ ဆိုလိုရင်းမှာ သံဝေဂယူဖွယ် ကောင်းလွန်းလှ၏။
စာပေလောကတွင် ဤကဗျာလင်္ကာနှင့် ပတ်သက်၍ အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီး၏ မျက်ဖြေလင်္ကာအဖြစ် တင်စားလေ့ရှိကြ၏။ အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီးသည် နရပတိစည်သူမင်း၏ အမိန့်ဖြင့် ပြည်နှင်ဒဏ်အပေးခံရကာ အသက်ကို စတေးသွားရခါနီး အချိန်တွင် အထက်ပါ မျက်ဖြေလင်္ကာကို ရေးသားကာ ဘုရင့်ထံ အပ်နှံခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ အမတ်ကြီး၏ ရသမြောက်သည့် ထိုရင်ဖွင့်ချက်တွင် လောကဓမ္မတာနှင့် ဓမ္မသဘာဝကို အထင်အရှားတွေ့မြင်ရ၏။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို အမျက်ဖြေခြင်းကို ဂုဏ်မြောက်အောင် ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့၏။ ဤလင်္ကာနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာတရား ရှုထောင့်ကကြည့်ကာ စာရေးသူ ခံစားမိသည့် ကောက်ချက်တစ်ခုမှာ “တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်စုံတစ်ဦးကို မသတ်ဘဲ လွှတ်လိုက်သော်လည်း ရုပ်နာမ်နှစ်ခု ခန္ဓာအစုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် သတ္တဝါတစ်စုအတွက် သေခြင်းတရားက အချိန်တန်လျင် လွှတ်သော်လည်း မလွတ်နိုင်ဘဲ ရောက်လာမည်သာ ဖြစ်သည်”ဟူသည့် မှတ်ချက်ပင်ဖြစ်၏။
မှန်၏။ လောကတွင် သတ္တဝါမှန်သမျှ မွေးပြီးလျှင် သေကြရမည်သာ ဖြစ်၏။ သေခြင်း၏အစသည် မွေးခြင်းသာ ဖြစ်၏။ မွေးလာလျှင် သေကြရမည် ဖြစ်သဖြင့် ထိုသေခြင်းတရားသည် သတ္တဝါတိုင်းအတွက် ဘဝတစ်ခုတွင် မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့နေကြမည်သာ ဖြစ်၏။ အချိန်တန်၍ သေခြင်းတရား ရောက်လာပါက မည်သည့်နေရာတွင် မည်သို့ပင် ရှောင်တိမ်းနေသော်လည်း မလွှတ်နိုင်သည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်၏။ သေရမည်ကို ကြောက်သဖြင့် ထိုသေခြင်းတရားကလွတ်အောင် အမျိုးမျိုး ရှောင်တိမ်းနေသော်လည်း ကံကုန်လျှင်ကား မည်သို့မျှ ရှောင်၍ရမည် မဟုတ်လှပေ။ အချိန်မတန်သေးသဖြင့် သေခြင်းတရားမှ တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ် လွတ်ကောင်းလွတ်နိုင်သော်လည်း ထိုလွတ်ခြင်းသည် အစဉ်ထာဝရ လွတ်ခြင်းမဟုတ်နိုင်ပေ။ အပြင်ရန်သူတစ်ဦးဦးနှင့် ကြုံတွေ့သဖြင့် ထိုသူများက မိမိ၏ အသက်အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်အောင် လွှတ်ပေးကောင်း လွှတ်ပေးနိုင်သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်က ကိလေသာတရားများမှ အမှန်တကယ် မလွတ်သေးပါက မည်သူက မည်မျှပင် လွှတ်ပေးစေကာမူ မလွတ်သေးသည်သာ ဖြစ်ပါ၏။ မိမိကိုယ်တိုင် ကိလေသာတရားများမှ လွတ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှသာ အမှန်တကယ် လွတ်နိုင်ကြမည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
စင်စစ် ဘဝတစ်ခု၏ အစသည် ဇာတိဟူသည့် ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုဇာတိ၏နောက်တွင် မဖောက်မပျက်ဘဲ ရောက်လာနေမည်ကား ဇရာဟူသည့် အိုခြင်းတရား၊ ဗျာဓိဟူသည့် နာခြင်းတရားနှင့် မရဏဟူသည့် သေခြင်းတရားများပင် ဖြစ်၏။ မရဏာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းတွင် သေခြင်းတရားနှင့် ပတ်သက်၍ “မရဏံ မေ ဓုဝံ၊ ဇီဝိတံ အဓုဝံ၊ ငါ့အားသေခြင်းတရားသည် မြဲသောသဘောရှိ၏၊ အသက်ရှင်ခြင်းသည် မမြဲသော သဘောရှိ၏။ မရဏံ မေ ဘဝိဿတိ၊ ဇီဝိတံ ဥပစ္ဆိဇ္ဇတိ- ငါ့အားသေခြင်းတရားသည် ဖြစ်လတ္တံ့၊ အသက်ရှင်ခြင်းသည် ပြတ်လတ္တံ့” စသည်ဖြင့် ဆင်ခြင်ရမည့် နည်းလမ်းများကို ညွှန်ပြထား၏။ ဘဝအဖန်ဖန်တွင် အကြိမ်အကြိမ်မွေးဖွားပြီး အကြိမ်ကြိမ် သေခဲ့ကြရပြီးသည့် သတ္တဝါများအနေဖြင့် ဘဝတစ်ခုတွင် ဇာတိဖြစ်လာပြီးနောက် မရဏတရားကား ဧကန်မုချ အချိန်မရွေး ရောက်လာနေမည်သာ ဖြစ်သဖြင့် သေခြင်းသည် မြဲသည့်သဘောရှိပြီး အသက်ရှင်ခြင်းသည် မမြဲသည့်သဘောရှိ၏။ ထိုသဘောများ ရှိနေသဖြင့် ဘဝတစ်ခုတွင် သေဘေးမှ မည်မျှပင် လွတ်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုငြားသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင်ကား သေခြင်းနှင့်ပင် အဆုံးသတ်သွားကြသည်သာ ဖြစ်၏။
အရင်းစစ်သော် အတွင်းကိလေသာ တရားများ မသေသေးသမျှ ဘဝမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မည်မျှပင် သေနေငြားလည်း နောက်ထပ်ရှင်သန်မှုကား ရှိနေကြဦးမည်သာ ဖြစ်၏။ ဘဝအသစ် တစ်ဖန်ဖြစ်နေကြဦးမည်သာ ဖြစ်၏။ ဘဝအသစ်ရှိနေလျှင် နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် အိုခြင်းတရား၊ နာခြင်းတရား၊ သေခြင်းတရားများလည်း အစဉ်အမြဲ ရောက်လာနေမြဲသာ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အတွင်းကိလေသာ မသေသေးဘဲ အပြင်ရုပ်နာမ်များ သေအောင်ကြိုးစားနေခြင်း၊ ရရှိထားသည့် ယခုဘဝ အသက်ရှင်နေရမှုမှ သေမည်ကို ကြောက်သဖြင့် လွတ်မြောက်မှုရအောင် ကြိုးစားနေခြင်းများသည်လည်း တစ်ဘဝတစ်နပ်စာ အဖြစ်သာ ရကောင်းရနိုင်သော်လည်း သံသရာအဆက်ဆက်တွင်ကား အသေဆက်နေကြမည်သာ ဖြစ်၏။ ကိလေသာတရားများမှ မလွတ်ကင်းသေးသမျှ သေကြေပျက်စီးမှုများမှ တစ်ဘဝတစ်နပ်စာ လွတ်အောင်ကြိုးစားသဖြင့် ကံကောင်းထောက်မစွာ လွတ်ပင်လွတ်ငြားသော်လည်း အချိန်တန်လျင်ကား ဧကန်မုချ တွေ့ကြုံနေကြရမည်သာ ဖြစ်၏။
သို့ဆိုလျင် ကိလေသာတရားများမှ အမှန်မလွတ်သေးဘဲ တဒင်္ဂအခိုက်အတန့် ချမ်းသာစေရေး၊ တဒင်္ဂအခိုက်အတန့် လွတ်မြောက်စေရေး အလေးပေးကာ ကိုယ်ကျင့်တရားများ ဖောက်ပြန်သည်အထိ၊ ဒုစရိုက်အမှုများ ကျူးလွန်သည်အထိ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြသည့် သတ္တဝါများ၏ လုပ်ရပ်များသည် အမှန်တကယ်ချမ်းသာရေး၊ လွတ်မြောက်ရေး မဟုတ်ဘဲ သံသရာအဆက်ဆက် ဆင်းရဲစေမှု၊ ဘဝမှာ အဖန်ဖန်သေရမှု စသည်တို့ကိုသာ ဖြစ်စေသည်မှာ အထင်အရှားပင် ဖြစ်၏။ မိမိကိုယ်တိုင်က ကိလေသာတရာများမှ မလွတ်မြောက်သေးဘဲ တစ်စုံတစ်ယောက်၊ တစ်စုတစ်ခုထံမှ တဒင်္ဂအခိုက်အတန့် လွတ်မြောက်မှုရရေးအတွက် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုးစားနေကြခြင်းသည် အမှန်တကယ် အကျိုးမပြီး အချည်းနှီးသာ ဖြစ်စေမည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်၏။
အကောင်းဆုံးနည်းမှာ မည်သူလွှတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလွှတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သူကြောင့် လွတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလွတ်သည်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်တိုင်သာ ကိလေသာတရားများမှ အမှန်လွတ်မြောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ တဒင်္ဂအခိုက်အတန့် မဆိုထားနှင့် အသက်ဘေးနှင့် ယှဉ်လာလျင်ပင် အသက်ရှင်ရေးအတွက် အကျင့်သိက္ခာများ ပျက်ပြားသည်အထိ ရေလိုက်လွဲမှု မဖြစ်စေဘဲ အဖန်ဖန် သေခဲ့ရသည့် သံသရာဘဝါဘဝများကို ပြန်လည်စဉ်းစား ဆင်ခြင်ကာ အသက်နှင့် အကျင့်ယှဉ်လာလျင် အကျင့်တရားကို ဦးစားပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပေ၏။ တစ်ဘဝ တစ်နှပ်စာ ရှင်သန်ရေးထက် သံသရာဘဝ အများ၌ ရှင်သန်နေရေးကို ဦးစားပေးသင့်ပေ၏။ အကျင့်တရားဖြင့် လွတ်မြောက်မှုကို အခြေတည်ကာ အဆုံးစွန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကိလေသာတရားများမှ လွတ်မြောက်ရန်အထိ ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပေ၏။ အခိုက်အတန့် လွတ်ရေးထက် အဆုံးစွန် လွတ်မြောက်ရေးကို အလေးပေးသင့်ပေ၏။
ထို့ကြောင့် လောကသားများ အနေဖြင့် အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီး စဉ်းစားဆင်ခြင်သကဲ့သို့ ဘဝတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်ကြိမ်တစ်ခါ လွတ်မြောက်မှုအတွက် လွှတ်ပေးတတ်သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်က ကိလေသာအစုများကြောင့် ရုပ်နာမ်နှစ်ခု၏ အနှောင်အဖွဲ့မှ မလွတ်မြောက်သေးပါက မည်သူက လွတ်အောင်လွတ်သော်လည်း အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်မှုမျိုး မဖြစ်နိုင်သဖြင့် တဒင်္ဂအခိုက်အတန့် လွတ်မြောက်ရေးကို ဦးစားပေးကာ အကျင့်တရားဖောက်ပြားမှု၊ ဒုစရိုက်အမှု ကျူးလွန်မှုများအထိ မဖြစ်ကြစေဘဲ အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်စေမှုကို ဖြစ်စေသည့် ကိလေသာတရားများ၏ ကုန်ဆုံးရာလမ်းစဉ်ကိုသာ တရားအလုပ် ကြိုးစားအားထုတ်ရင်းဖြင့် လိုရာပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းကိုင်ကြရမှာ ဖြစ်သဖြင့် မည်သူလွှတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလွှတ်သည်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်တိုင်သာ ကိလေသာ အနှောင်အဖွဲ့များမှ လွတ်အောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
။ အချိန် 10/18/2011 09:41:00 AM
“လူဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေတဲ့သတ္တ၀ါ တစ်မျိုးပဲ”လို့ဆိုတဲ့ စကားလေးကို စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေနေရတဲ့ အဖြစ်ကို စဉ်းစားနေရင်း အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေတဲ့သူအချင်းချင်း အဆင်မပြေလို့ အဖွဲ့အစည်း အပြင်ရောက်နေသူတွေကိုပါ သတိရမိပါတယ်။ တကယ်တော့ အဖွဲ့အစည်းလို့ ဆိုကတည်းက တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ ရပ်တည်လို့ ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အောင်မြင်ဖို့၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မပျက်စီးဖို့ ဆိုတာဟာ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ ရှိနေကြတဲ့သူတွေရဲ့ ညီညွတ်မှုအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်တဲ့သူ တစ်ဦးစီရဲ့ နားလည်ပေးမှု၊ ခွင့်လွှတ်တတ်မှု၊ ကူညီစောင့်ရှောက်တတ်မှု စတာတွေအပေါ်မှာ အဓိကကျပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ မဖြစ်သလို တစ်ဦးတစ်ယောက် အပေါ်မှာပဲ မှီခိုနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အားလုံးကိုယ့်တာဝန်၊ ကိုယ့်အသိ၊ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပဲ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်မရှိရင် မဖြစ်သလို သူမရှိလို့လည်း မဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ သူမလုပ်နိုင်ပေမယ့် သူလုပ်နိုင်တာ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာတွေလည်း ရှိကောင်းရှိနေမှာပါ။ သေချာတာကတော့ သူ့အားသာချက်နဲ့သူ အလှကိုယ်စီ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“သံဃာအား ဘုရားမလွန်ဆန်သာ” ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဘုရားရှင်ပင်ဖြစ်ပေမယ့် သံဃာ့ပရိတ်သတ်နဲ့ ယှဉ်လာရင် သံဃာအင်အားကို အလေးထားကာ သံဃာ့အလိုဆန္ဒနောက်ပဲ လိုက်လေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သံဃာဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုက အစုအဖွဲ့လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် အစုအဖွဲ့ ညီညွှတ်ရင် ချမ်းသာကြောင်းလည်း ဗုဒ္ဓက မိန့်မှာတော်မူလေ့ရှိပါတယ်။ သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ- ညီညွတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ ချမ်းသာကြောင်း ဆုံးမတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ မစွမ်းသာ အများပါမှ ချမ်းသာရလို့ ဆိုသလို တစ်ယောက်ချင်း စုစည်းထားတဲ့ အစုအဖွဲ့ရဲ့ အားဟာ နဲနဲနဲနဲ ပေါင်းထားတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ အားပါပဲ။ တစ်ဦးချင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အရည်အချင်းဟာ သူတစ်ဦးတည်းဆို ဘာမှမဖြစ်လာပေမယ့် သူလိုတစ်ခုခု အားသာချက်ရှိတဲ့ သူတွေစုလိုက်တော့လည်း အားအင်တစ်ခု ဖြစ်သွားတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ သူ့အားသာချက်နဲ့သူ အလှကိုယ်စီတော့ ရှိနေကြတယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စကားစပ်လို့ ဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ရေးတဲ့ ကဗျာလေးတောင် သတိရမိပါသေးတယ်။ ဆရာကြီးက သူ့ကဗျာလေးကို “အလှကိုယ်စီ” လို့ အမည်ပေးပြီး
စွမ်းလောက်နိုင်သူ ချည်းပါတကား…။ ။ (တင်မိုး)” လို့ ရေးသားစပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဆရာကြီး စပ်ဆိုခဲ့သလို အားလုံးဟာ ကိုယ်စီအလှ ကိုယ်စီအစွမ်းလေးတွေ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးတည့်လာတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးသိသာလှပါတယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာလေးက လူတိုင်းစွမ်းအားကိုယ်စီ၊ အလှကိုယ်စီ ရှိနေကြတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ အထင်မသေးကြဖို့နဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးကာ သူတစ်ပါးကို မနှိမ့်ချမိစေဖို့ သတိပေးနေသလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းတို့ မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်း အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့ ဆရာကြီး သတိပေးနေသလို မဟုတ်ကြဘဲ သူ့ကိုယ်နှိပ် ကိုယ့်သူနှိပ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေက ရှိနေပြန်တော့ ပညာရှင်ကြီးများရဲ့ အဆုံးအမလေးတွေကိုတောင် တစ်ခါတစ်လေ အားနာမိသလို ဖြစ်မိပါသေးတယ်။ လူဟာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေတဲ့ သတ္တ၀ါလို့ ဆိုကြပေမယ့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာရင် ကွဲကြပြဲကြ တိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့ အစဉ်အလာတွေ ရှိနေတတ်တဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက်တော့ မြန်မာဟာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ မနေတတ်တဲ့ သတ္တ၀ါလို့တောင် ပြောရမလို ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘုရားဟောတဲ့ “ညီညွတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ ချမ်းသာတယ်”ဆိုတဲ့ သုခကို မခံစားရတာ ဖြစ်မှာပါ။
သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဘုန်းဘုန်းတို့ မြန်မာများကတော့ အဖွဲ့အစည်း မလုပ်နဲ့ လုပ်လိုက်တာနဲ့ တိုက်မယ်ခိုက်မယ် ဆိုတာတွေပဲ ဆိုတော့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ဖြစ် ထူးထူးခြားခြား ကြီးကြီးမားမား ပေါက်ရောက် အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ မရှိလောက်အောင်ပါပဲ။ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းရော၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရော အကုန်ပြဿနာတွေနဲ့ သူအုပ်စုနဲ့သူ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ကွဲကြပြဲကြတာက အဆိုးဆုံးပါပဲ။ လုပ်တာက ဘာသာရေးအလုပ် လုပ်ရပ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက မနာလိုမှု၊ ၀န်တိုမှု၊ အထင်သေးမှု၊ မာနကြီးမှုတွေနဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်လိုညီညွတ်မှုမှ မရဘဲ နောက်ဆုံးတော့ ကွဲတာ၊ ပျက်တာ၊ ပျောက်တာနဲ့ပဲ အဆုံးသပ်သွားရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံတကာမှာ ကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းဆိုရင် ထည်ထည်ဝါ၀ါ ခန့်ခန့်ငြားငြား မရှိကြပဲ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပါ။ ဒါဟာ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းမှာ ရှိကြတဲ့ အလှလေးတွေကို ဂရုမစိုက်မိဘဲ သူရှိမှဖြစ်မယ်၊ ငါရှိမှဖြစ်မယ်၊ သူမှမှန်တယ်၊ ငါမှမှန်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးမှုနဲ့ သူတစ်ပါးအပေါ် နှိမ့်ချမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရှိနေသမျှတော့ မြန်မာ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ညီညွတ်မှုနဲ့ ချမ်းသာမှုကို မရနိုင်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဝေးနေကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အလုံးစုံ ပြည့်စုံတဲ့ လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ကတော့ ဘယ်ကိစ္စမှ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အများပေါင်းစုပြီး သူ့နေရာ၊ သူ့ကျွမ်းကျင်ရာနဲ့ ပေါင်းစပ်လုပ်နိုင်မှ ကောင်းမြတ်တဲ့ အကျိုးရလာဘ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သူ့အစွမ်းနဲ့ သူ့အားသာချက် ရှိနေတဲ့အတွက်လည်း လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်သလို လုပ်နိုင်ကြဖို့ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ဖွဲ့လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖွဲ့လာပြီးမှ ကိုယ်မရှိရင် မဖြစ်ဘူး၊ သူမရှိရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုး မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သူမပါလို့ မဖြစ်သလို ကိုယ်မပါလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ချည်းပဲ မပြီးသလို ကိုယ့်ချည်းပဲလည်း မပြီးပါဘူး။ သူရောကိုယ်ရော ပေါင်းစုမှ အားအင်းဆိုတာ ဖြစ်လာကြတာပါ။ ထီးဆောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့
မင်း သူ ငါ ညီညာစုံမှ
(ထီးဆောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တစက္ကပါလ)”ဆိုတဲ့ အဆုံးအမလိုပဲ မင်း၊ သူ၊ ငါ အစုံပါမှ အားလုံးအောင်မြင်လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အားလုံးဟာ အလှကိုယ်စီ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
ဒါကြောင့် အလှကိုယ်စီ ရှိနေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေတဲ့သူအချင်းချင်း သူ့ကိုယ်နှိမ် ကိုယ့်သူနှိမ့်တဲ့ သဘောမျိုး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး သူများကို အထင်သေးတဲ့ သဘောမျိုး မထားကြဘဲ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ညီညွတ်မှုရကာ ချမ်းသာကြစေဖို့ သူ့အလှလည်း ကိုယ်အသိအမှတ်ပြု၊ ကိုယ့်အလှလည်း သူအသိအမှတ်ပြုရင်း သူ့အပေါ်ကိုယ်နားလည်၊ ကိုယ့်အပေါ်သူနားလည်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ နားလည်မှုတရား၊ အရိုအသေပြုမှုတရား၊ နှိမ့်ချမှုတရားလေးတွေနဲ့ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ဆက်ဆံကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာ့အဖွဲ့အစည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ခြားဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာ မဆို အောင်မြင်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရကြမှာ မလွဲဧကန်ပဲ ဖြစ်ပါတော့ကြောင်း…။ အားလုံး အလှကိုယ်စီနဲ့ အလှပိုနိုင်ကြပါစေ…
Facebook က အမေးတစ်ပုဒ် (၇)
။ အချိန် 10/17/2011 07:22:00 AM
Zin Nway Ei Win
မေး။ သီလဆိုတာ ငါးပါးသီလကို ဆိုလိုတာပါလားဘုရား။
တကယ်လို့ ငါးပါးသီလကို တိတိကျကျ မဆောက်တည်နိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီလူက တကယ်ကို မကောင်းတဲ့လူ၊ မစင်ကြယ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာလား အရှင်ဘုရား။
ငါးပါးသီလ တခါကျိုးပြီဆိုတာနဲ့ နောက် စောင့်ထိန်းလဲ အကျိုးရှိပါသလားဘုရား။
ကျုးလွန်လိုက် စောင့်ထိန်းလိုက်ဆိုရင်ရော အဲဒီသီလက အကျိုးမရှိတဲ့သီလဖြစ်ပါသလား ဘုရား။
မနာပ ဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ ‎>> Zin Nway Ei Win
ဖြေ။ လူတွေအတွက် အခြေခံ သီလကတော့ ငါးပါးသီလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးပါးသီလကို ကောင်းကောင်းလုံနေရင်ကိုပဲ ဘဝသံသရာမှာ အကောင်းဆုံး အားကိုးရာ ဖြစ်နေပါပြီ။ သီလကို တိတိကျကျ မစောင့်ထိန်းနိုင်တဲ့အတွက် တစ်သက်လုံးမကောင်းတဲ့သူ၊ မစင်ကြယ်တဲ့သူ၊ ယုတ်မာတဲ့သူလို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်တော့ ခံယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီငါးပါးသီလဟာ လူတွေအတွက်တော့ တစ်သက်လုံးလုံနေရင် တစ်သက်လုံးကောင်းပေမယ့် မစောင့်ထိန်းတာနဲ့စာရင် စောင့်ထိန်းနိုင်တဲ့အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ထိန်းရင်း ငါးပါးသီလ ကျိုးပေါက်သွားခဲ့လည်း နောက်ထပ်စောင့်ထိန်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်မရွေးစောင့်ထိန်းနိုင်ပါတယ်။
ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်က တစ်ကန့်စီအကျိုးပေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် ကောင်းတဲ့အကျိုးကို ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပြီး မစောင့်ထိန်းနိုင်လို့ ချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာလည်း မကောင်းတဲ့အပြစ်ကတော့ ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်ရှင် မေးသလို သီလဟာ ကျူးလွန်လိုက် စောင့်ထိန်းလိုက်လုပ်မိရင်လည်း ကျူးလွန်တဲ့အခါ အပြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး စောင့်ထိန်းတဲ့အခါမှာလည်း ကောင်းကျိုးရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ မကျူးလွန်မိအောင် အရင်ကြိုးစားပြီး မသိလို့ ကျူးလွန်မိလိုက်ရင်လည်း အသိဝင်တဲ့အခါ ပြန်ပြီးစောင့်ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ တစ်ခါကျူးလွန်မိလို့ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး မထူးဇာတ်ခင်းတာထက်စာရင် အသိသတိဝင်တဲ့အခါမှာ ရနိုင်သလောက်ပြန်တည်ဆောက်နိုင်ရင် အဲဒီအတွက် ကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ ရှိနေမှာအမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သဘောပေါက်ပါပီ အရှင်ဘုရား။ တပည့်တော် ငါးပါးသီလကို ကျူးလွန်နေပါလားလို့ သိသိကြီးနဲ့ ကျူးလွန်တဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိပါတယ်ဘုရား။ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် စောင့်ထိန်းဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ် အရှင်ဘုရား.. _/\__
ပဝါရဏာက ပေးတဲ့မက်စေ့ခ်ျ (message) (သို့) ပဝါရဏာပြုကြစို့
။ အချိန် 10/15/2011 10:46:00 AM
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့က ဘုန်းဘုန်းတို့ ကိုရီးယားရောက် ထေရဝါဒ မြန်မာရဟန်းတော်များ စုပေါင်းပြီး သံဃာ့ပဝါရဏပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းမှာ ရှိနေပမယ့် မတူညီတဲ့ အရပ်ဒေသတွေမှာ ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် ရဟန်းတော်အချင်းချင်းလည်း မတွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နှစ်မှာအနည်းဆုံး တစ်ခါလောက်တော့ ပဝါရဏာပွဲမှာ မဖြစ်မနေ တွေ့ဆုံပြီး ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ လူမှုရေးတွေ အတွက်လည်း ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြဖို့ ကတိကဝတ်ပြု ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေမှာလည်း မအားတဲ့ကြားက ပဝါရဏပွဲကို သံဃာအများ တက်ရောက်ပြီး ပဝါရဏ ပြုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပဝါရဏပြုပြီးတော့ ဘုန်းဘုန်းတို့ထေရဝါဒ ရဟန်းတော်များ လစဉ်စုဆောင်းလာခဲ့ကြတဲ့ ပညာပဒေသာပင် ထောက်ပံ့ပေးရေး အစီအစဉ်ကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အများဆန္ဒအရ ကိုရီးယား ထေရဝါဒ ရဟန်းတော်များရဲ့ ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၂ခုနှစ်ကစပြီး နှစ်စဉ်တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပေမယ့် တက္ကသိုလ် ပညာရပ်ကို ဆက်မတက်နိုင်လောက်အောင် ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု ဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တစ်ဦးဦးကို ရွေးချယ်ပြီး ကျောင်းပညာရေး ပြီးဆုံးအောင်၊ လစဉ်နှစ်စဉ် ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့လည်း ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သံဃာတော်များရဲ့ လူသားအကျိုးပြု၊ တိုင်းပြည်အကျိုးပြု၊ လူမှုအကျိုးပြု ပညာသင်ဆု အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေရှည်ထောက်ပံ့နိုင်အောင် ကြိုးစားရင်း ဘုန်းဘုန်းတို့ သံဃာ့အားနဲ့ နိုင်ငံလူမျိုးအားကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ပံ့ပိုးဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထားပါတော့။ ဒီနေရာမှာ အဓိကပြောချင်တာက ပဝါရဏနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပဝရဏာပွဲမှာလည်း ဒကာတစ်ယောက်က ပဝါရဏနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကို မေးမြန်းခဲ့လို့ အကြီးဆုံးမထေရ်တစ်ပါးက ဖြေကြားပေးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ပဝါရဏာဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ပညတ်ချက်နဲ့အညီ ပြုလုပ်ရတဲ့ ဝိနည်းတော်ဆိုင်ရာ လိုက်နာစောင့်ထိန်းမှု တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရားတပည့်သား သံဃာတော်များအတွက် အရေးကြီးတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဝါရဏက ချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ မှတ်ချက်ကလည်း မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ရဟန်းသံဃာများအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပါ လိုက်နာကျင့်သုံး နေထိုင်သင့်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဟန်းတော်များ ပ၀ါရဏာပြုကြဖို့ မြတ်စွာဘုရား ခွင့်ပြုခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကလည်း အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံး နေတော်မူစဉ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ကောသလတိုင်း၊ ဇနပုဒ်တစ်ခုရဲ့ တောကျောင်းမှာ ၀ါဆိုဝါကပ်ပြုကြတဲ့ ရဟန်းတော်များဟာ ၀ါတွင်းကာလမှာ အချင်းချင်း ချမ်ချမ်းသာသာ သီတင်းသုံးပြီး ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကြပါတယ်။ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြရင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရနိုင်တယ်၊ ချမ်းသာမှုကို ရနိုင်တယ်၊ ငြင်းခုံခိုက်ရန်မရှိဘဲ နေထိုင်နိုယ်တယ် စတဲ့ အကြံအစည်များနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ရဟန်းတော်များဟာ ၀ါတွင်းသုံးလ ကာလပတ်လုံး အချင်းချင်း စကားတစ်လုံးမှ မပြောကြဘဲ ဆွမ်းခံဝတ်၊ ခြေဆေးဝတ်စတဲ့ ၀တ္တရားတွေကို ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေအောင်လုပ်ပြီး နေထိုင်ကြဖို့၊ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုသာ ကျေပွန်အောင်လုပ်ပြီး စကားမပြောဘဲ နေကြမယ်ဆိုရင် ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်ကြမှာဖြစ်လို့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ရင်း စကားမပြောဘဲ နေကြဖို့ အားလုံးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ကာ ၀ါတွင်းကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီရဟန်းတော်များဟာ စကားမပြောဘဲ နေခဲ့ကြတဲ့အတွက် တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါး အကောင်းလည်း မသိခဲ့ကြသလို အဆိုးလည်း မသိခဲ့ကြပါဘူး။ အပြစ်လည်း မသိကြသလို အနှစ်လည်း မသိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ၀ါတွင်းကာလ ကုန်ဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။
၀ါကျွတ်လို့ ဘုရားရှင်ထံ အဖူးအမျှော်သွားတဲ့အခါ ဘုရားရှင်က အဲဒီရဟန်းတော်များကို ၀ါတွင်းကာလ ချမ်ချမ်းသာသာ နေခဲ့ရမှု ရှိမရှိ မေးမြန်းတော်မူပါတယ်။ ဒီအခါ ရဟန်းတော်များက မိမိတို့ အားလုံးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီ ၀ါတွင်းကာလမှာ တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါး စကားမပြောကြဘဲ ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်ခဲ့ပါကြောင်း လျှောက်ထားပါတယ်။ ရဟန်းတော်များရဲ့ လျှောက်ထားချက်ကို နားထောင်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓက “ရဟန်းတို့ သင်တို့နေထိုင်ခဲ့သည့် အကျင့်သည် မဂ်ဖိုလ်မပြီး အချည်းနှီးသော အကျင့်ဖြစ်၏၊ နွားဆိတ်စသော သတ္တ၀ါများ၏ အကျင့်ဖြစ်သကဲ့သိုိ့ တိတ္တိတို့၏ အကျင့်လည်းဖြစ်၏၊ ဤသို့သော အကျင့်နှင့် နေထိုင်သော သင်တို့သည် ချမ်းသာစွာ နေထိုင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်၊ မချမ်းမသာ နေထိုင်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်၏..” စသဖြင့် ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကာ “ရဟန်းတို့ ဝါမှထသော ရဟန်းတို့အား မြင်၍ဖြစ်စေ၊ ကြား၍ဖြစ်စေ၊ ယုံမှား၍ဖြစ်စေ သုံးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် ဖိတ်ကြားခြင်း 'ပဝါရဏာပြုခြင်း' ငှါ ခွင့်ပြု၏၊ ထိုသို့ ဖိတ်ကြားခြင်းသည် သင် တို့အတွက် အချင်းချင်း လိုက်လျောခြင်း အာပတ်မှ ထမြောက်စေခြင်း ဝိနည်းကို ရှေးရှုခြင်းဖြစ်လတံ္တ့။” စသည်ဖြင့် မိန့်တော်မူပြီး ပ၀ါရဏာ ပြုဖို့ပါ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ပ၀ါရဏာပြုနည်းကိုလည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်က ၀ါစဉ်အလိုက် ''အရှင်ဘုရားတို့ သံဃာကို ဖိတ်ကြားပါ၏၊ မြင်၍ဖြစ်စေ၊ ကြား၍ဖြစ်စေ၊ ယုံမှား၍ဖြစ်စေ အရှင်တို့သည် တပည့်တော်အား အစဉ်သနားခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ပြောဆိုကုန်လော့၊ (အပြစ်ကို) မြင်သည် ရှိသော် ကုစားပါအံ့။”လို့ ဆိုကာ ပြုကြဖို့ မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ပ၀ါရဏာပြုဖို့ ခွင့်ပြုခြင်း အကြောင်းးနဲ့ ပ၀ါရဏာပြုနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဘုန်းဘုန်းအနေနဲ့ ပဝါရဏာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မက်စေ့ခ်ျတစ်ခုကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကို ပေးလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပ၀ါရဏာဆိုတာ ဖိတ်ကြားခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ရဟန်းတော်များ အချင်ချင်း တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါး အပြစ်ကို မြင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သံသယဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုက်ရိုက်ပြောဆို ဖိတ်ကြားကာ အပြစ်ကိုမြင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က အပြစ်ကို ပြောဆိုကြဖို့၊ အပြစ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း အပြစ်ကို ၀န်ချပြီး အဲဒီအပြစ်ကို ကုစားရင်း တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါး ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်သီတင်းသုံးကြဖို့ စတဲ့စတဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ အတွက် ဒီလိုပ၀ါရဏာ ပြုခွင့်နဲ့ပြုနည်းများကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ညွန်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိစေလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီပ၀ါရဏာကို အကြောင်းပြုပြီး လက်တွေ့ဘ၀ လူသားများ အနေနဲ့ အချင်းချင်း ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်မယ့် လမ်းညွှန်ကိုယူကာ လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ တင်ပြလိုရင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပ၀ါရဏာက ပေးတဲ့ လောကသား အချင်းချင်း ချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်မယ့် မက်စေ့ခ်ျလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ပေးဝေလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ ပ၀ါရဏာ ပြုကြတဲ့ ရဟန်းတော်များ အချင်းချင်း ဖိတ်ကြားကြတဲ့ ဖိတ်ကြားချက်လေးက လောကသားတွေအတွက် တကယ့်ကို အတုယူလိုက်နာ ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “သံဃာတော်များ အနေနဲ့ တပည့်တော်ကို တပည့်တော်ရဲ့ အပြစ်တစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ယုံမှားသံသယ ရှိတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောဆိုကြပါ၊ တပည့်တော် အနေနဲ့လည်း အဲဒီအပြစ်ကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူပြီး ကုစားပါမယ်၊ နောင်မဖြစ်အောင်၊ သတိထားပြီး နေထိုင်ပါမယ်”တဲ့။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ ခံယူချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ဘ၀မှာ ကူညီပြသ လမ်းညွန်မှုတွေနဲ့ တကယ့်ကို အောင်မြင်မှုနဲ့ ချမ်းသာမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတွေးကြည့်ရင် လောကမှာ ပြည့်စုံတဲ့ သူဆိုတာ တစ်ယောက်မှ မရှိသလို၊ အပြစ်မလုပ်ဖူး၊ မမှားဖူးတဲ့ သူဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပြစ်ကို မမြင်သူတွေ၊ အပြစ်ကို အပြစ်လို့ သိအောင်ညွန်ပြပေးမယ့်သူ မရှိသူတွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အပြစ်ကို ညွန်ပြသူတွေ ရှိပေမယ့် အဲဒီအပြစ်ကို ၀န်ခံပြီး နောင်မဖြစ်အောင် ပြုပြင်နိုင်တဲ့ သူတွေလည်း ထင်သလောက် မရှိကြပြန်ပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက အပြစ်ကို ပြောဆိုဆုံးမပေးဖို့ ဖိတ်ကြားပြောဆိုနိုင်တဲ့သတ္တိ မရှိသူတွေ၊ အပြစ်ကို ပြသပြောဆိုရင်လာရင် ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ကျေးဇူးတင်စွာ လက်ခံနိုင်တဲ့သတ္တိ မရှိသူတွေ များနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ကို ပြောပြလာရင် ကျေးဇူးတင်စွာ လက်ခံပြီး နောင်မဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနေထိုင်၊ ပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် မရှိလို့ကတော့ လောကကြီးမှာ သတ္တ၀ါတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြစ်ပြသူကလည်း အပြစ်ချဖို့ ကြိုးစားနေ၊ အပြစ်အပြခံရသူကလည်း အပြစ်ကို မခံယူဘဲ ပြန်လှန်အပြစ်ပုံချဖို့ ကြိုးစားနေလို့ကတော့ ဘုရားရှင်ညွန်ပြတဲ့ ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်နိုင်ရေးနဲ့ အဝေးကြီးဝေးနေကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မချမ်းသာမှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ချမ်းသာမှုကို အလိုရှိတဲ့ ဘုရားရှင်က သူ့သားတော် ရဟန်းတော်များကို အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ပ၀ါရဏာပြုပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ သီတင်းသုံး နေထိုင်ကြဖို့ မိန့်မှာတော်မူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အမှားများတတ်တဲ့ ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် အပြစ်ကို ပြသပြောဆို ပေးမယ့်သူ ရှိနေတာကိုက နေတတ်မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်စရာ ဖြစ်နေတာပါ။ ယူတတ်မယ်ဆိုရင် အပူသက်သာစရာ ဖြစ်နေတာပါ။ မြောက်ပင့်ပြီး ပေါင်းသင်းစားသောက်ကာ အပြစ်တစ်ခုခု ဖြစ်လာတဲ့အခါမှ ကိုယ့်အပေါ်ပုံချပြီး ရှောင်ထွက်သားတတ်တဲ့ သူတွေအများကြီး ရှိနေတာထက်စာရင် အမှားကိုထောက်ကာ အပြစ်ကို ပြသလမ်းညွှန်ပေးတဲ့သူ တစ်ယောက်နှစ်ယောက် ရှိနေတာက ပိုပြီးဘ၀ကို မြင့်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးက သူတော်ကောင်းကြီးများဆိုရင် အပြစ်ကိုထောက်ပြ ပြောဆိုပေးတတ်တဲ့ ဆရာများနဲ့ များများတွေ့ဆုံ ရပါလို၏လို့တောင် တောင်းဆုပြုကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မသိမှုအားကြီးတတ်တဲ့ ပုထုဇဉ်တွေမှာ မသိတာကို သိအောင်ပြသပေးတဲ့သူ ရှိနေတာဟာ ဘ၀မှာ ဂုဏ်ယူစရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ညွန်ပြသူတွေက ဘယ်လောက်ပဲ ညွန်ပြညွန်ပြ ပြောဆိုဆုံးမသူတွေက ဘယ်လောက်ပဲ ပြောဆိုဆုံးမဆုံးမ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အပြစ်ကို ကျေကျေနပ်နပ် ခံယူကာ လက်ခံပြုပြင်နိုင်မှု မရှိလို့ကတော့ ဆရာရှိလည်း အလကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်က ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပြစ်ကို ခံယူတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပြုပြင်နိုင်တဲ့ အကျင့်ရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလို ခံယူမှုနဲ့ ပြုပြင်နိုင်မှု ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီသူအတွက် အောင်မြင်မှုလမ်းဟာ အချိန်မရွေး လာနေမှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်နိုင်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စောင့်ရှောင်နိုင်မှု ရှိနေတာကိုက အတ္တသမာ ပဏိဓိမင်္ဂလာ ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညွန်ပြသူနဲ့ လက်ခံသူမှာ အညွန်အပြကောင်းသူ ရှိဖို့လိုသလို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံ ပြုပြင်လိုသူလည်း ရှိဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အချုပ်အနေနဲ့ ပြောလိုတာက ဘုရားသားတော် ရဟန်းတော်များ အချင်းချင်း အပြစ်ကို ပ၀ါရဏာပြုပြီး ဖိတ်ကြား ပြုပြင်ကြသလို အပြစ်တွေနဲ့မကင်းတဲ့ အပြစ်လောကကြီးမှာ ရှိကြတဲ့ ပုထုဇဉ်တွေ အနေနဲ့လည်း အချင်းချင်း အပြစ်တွေကို ပ၀ါရဏာ ပြုကြည့်ကြဖို့ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်တွေပုံမချကြဘဲ အပြစ်ရှိရင် ပြောဆိုပြုပြင်ပေးနိုင်အောင် ဖိတ်ကြားကာ ထောက်ပြပြောဆို လာရင်လည်း ကျေကျေနပ်နပ် ခံယူတတ်ပြီး နောင်မဖြစ်အောင် ပြုပြင်နေထိုင်ကြည့်ကြဖို့ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်ကို မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သံသယရှိတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖိတ်ကြားပြီး လက်ခံပြုပြင်ကြဖို့ပါ။ အဲဒီလိုသာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်တွေကို ပြောဆိုလက်ခံ ပြုပြင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ အမှားများတဲ့ လောကကြီးမှာ နေနေပေမယ့် အမှားနည်းပြီး အများတွဲကြမယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း ပ၀ါရဏာက ပေးတဲ့ မက်စေ့ခ်ျတစ်ခုအဖြစ် အတုယူပြုပြင်နိုင်ဖို့ စေတနာထား မေတ္တားအားဖြင့် တစ်လုံးတစ်ပါဒ တင်ပြလိုက်ရပါတော့တယ်။ အားလုံး ပ၀ါရဏာ ပြုနိုင်ကြပါစေ….
။ အချိန် 10/13/2011 10:39:00 AM
သီတင်းကျွတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် နောက်ထပ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထင်ရှားတဲ့ ကုသိုလ်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ ကထိန်အလှူပွဲတွေက အသီးသီး ရှိလာနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားဝိနည်းတော် သတ်မှတ်ချက်အရ သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့ကစပြီး တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့အထိ (၁)လတာ ကာလကို ကထိန်အလှူပွဲ ကျင်းပရာ ကာလအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှန်းလုံးရှိ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ ကထိန်ပွဲတွေကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပပြုလုပ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကထိန်ပွဲတွေ လုပ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ချင်ကြတာပဲ သိတာများတတ်ပါတယ်။ ကထိန်ဆိုရင် ပဒေသာပင်ကြီးတွေ သီးပြီး ဆိုင်းသံဘုံသံ တညံညံနဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ လှည့်လည်ကာ နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပို့ဆောင်လှူဒါန်းကြတဲ့ပွဲလို့ အများက သိနေတတ်ကြပါတယ်။ ကထိန်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီအလှူကို ကထိန်လို့ ခေါ်တာလဲ၊ ကထိန်ခင်းတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ စသဖြင့် မေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တိတိကျကျ ပြောဆိုရှင်းပြဖို့ ခက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကထိန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေ သိထားဖို့ ကထိန်အကြောင်း သိကောင်းစရာ ဆိုတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးသားတင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင် သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတ၀န် ကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံးနေတော်မူနေတဲ့ အချိန်တုန်းက ဖြစ်ပါတယ်။ အာရညကဓုတင်၊ ပိဏ္ဍပါတဓုတင်၊ ပံ့သုကူဓုတင်၊ တိစီဝရိတ်ဓုတင်ကို ဆောက်တည်ကြတဲ့ ပါဝေယျကတိုင်းသား ရဟန်းတော် အပါးသုံးဆယ်ဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ဖူးမျှော်ဖို့ အလွန်ဝေးတဲ့ အရပ်ကနေ သာဝတ္ထိပြည်ကိုလာရင်း လမ်းမှာဝါဆိုရမယ့်နေ့ နီးလာတဲ့အတွက် သာဝတ္ထိပြည်အထိ မသွားနိုင်တော့ဘဲ သာဝတ္ထိပြည်နဲ့ ယူဇနာ (၆၀)ဝေးကွာတဲ့ သာကေတမြို့မှာပဲ ၀ါဆိုလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်နဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီရဟန်းတော်များဟာ ဘုရားရှင်သီတင်းသုံးတော်မူရာ သာဝတ္ထိပြည်အနီးမှာ ရောက်နေပြီးမှ ဘုရားရှင်ကို မဖူးမျှော်ရပဲ ၀ါဆိုနေရတဲ့အတွက် စိတ်နှလုံး မပျော်မွေ့ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၀ါကျွတ်တဲ့အခါ ဘုရားရှိရာ အရပ်ကို ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ လမ်းခရီးမှာ မိုးကလည်း အလွန်ကြီးတဲ့အတွက် အဲဒီရဟန်းများ ၀တ်ရုံထားတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့ ဓုတင်ဆောင် နှစ်ထပ်သင်္ကန်းများဟာ မိုးရေများနဲ့ အရမ်းကို စိုရွဲနေကြပါတယ်။ ဘုရားထံမှောက် ရောက်လာကြတဲ့ အဲဒီရဟန်းတော်များကို ဘုရားရှင်က ၀ါတွင်းကာလ ချမ်းချမ်းသာသာ သီတင်းသုံးခဲ့ရမှု ရှိမရှိ မေးမြန်းတဲ့အခါ ပါဝေယျကတိုင်းသား ရဟန်းတော် အပါးသုံးဆယ်ဟာ မိမိတို့ရဲ့ အဖြစ်ကို အကျိုးအကြောင်း လျှောက်ပြပါတယ်။
ဒီလို ရဟန်းတော်တို့ရဲ့ အခက်အခဲ အခြေအနေများကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်က “ရဟန်းတို့ ၀ါကျွတ်ပြီးသော ရဟန်းတို့အား ကထိန်ခင်းခြင်းငှါ ခွင့်ပြု၏၊ ရဟန်းတို့ ကထိန်ခင်းပြီးသော ရဟန်းတို့အား ထင်ရှားရှိသော ရဟန်းကို မပန်ကြားဘဲ ဒါယကာ အိမ်သို့သွားနိုင်ခြင်း၊ တိစီဝရိတ် အဓိဋ္ဌာန်တင်ထားသော သင်္ကန်းကို မယူဘဲ သွားနိုင်ခြင်း၊ ဂဏဘောဇဉ်ကို စားနိုင်ခြင်း၊ အလိုရှိတိုင်း အဓိဋ္ဌာန် ၀ိကပ္ပနာမပြုသော သင်္ကန်းကို ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ထိုကထိန်းခင်းသော ကျောင်း၌ သင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း ကထိန်ခင်းသော ရဟန်းတို့အား ဖြစ်ရခြင်းဟူသော ဤငါးပါးသော အာနိသင်တို့ ရကုန်၏” စသဖြင့် မိန့်တော်မူကာ ကထိန်ခင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုတော်မူပါတယ်။ ဒါဟာ ကထိန်ခင်းခြင်းနဲ့ ကထိန်သင်္ကန်းအလှူ ဖြစ်ပေါ်မှုရဲ့ အစပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကထိန်ဆိုတာ ကထိနဆိုတဲ့ ပါဠိစကားကို မြန်မာမှုပြုပြီး အလွယ်အသုံးပြုထားတဲ့ ပါဠိပျက် ဝေါဟာရစကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကထိနရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ခိုင်မြဲခြင်း၊ မြဲမြံခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကထိန်ဆိုတာ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့ကစပြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အထိ (၃)လတာ ၀ါဆိုဝါကပ် ပြုတော်မူပြီးကြတဲ့ ရဟန်းတော်များအား သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ဒီသင်္ကန်းကို အလှူခံ ရရှိတဲ့ ရဟန်းတော်များဟာ ဒီသင်္ကန်းကို အကြောင်းပြုကာ ၀ိနည်းတော်များထဲက သိက္ခာပုဒ်အချို့ကို ကာလအပိုင်းအခြား တစ်ခုအနေနဲ့ ကင်းလွှတ်ခွင့်ဆိုတဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကို သေချာပေါက် ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ရစေနိုင်တဲ့ အတွက် ကထိန- ကထိန်လို့ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကထိန်ခင်းတာဟာ အ၀တ်သင်္ကန်းနဲ့သာ ကထိန်ခင်းနိုင်တဲ့ အလှူဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီသင်္ကန်းကိုလည်း ကထိန်သင်္ကန်း၊ ဒီအလှူကိုလည်း ကထိန်အလှူလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်မြို၊ ဘယ်ကျောင်းမှာ ကထိန်သွားခင်းမလို့ ဆိုတဲ့ အပြောအဆိုအသုံး အနှုန်းကို လူအတော်များများ ပြောဆိုသုံးစွဲတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကထိန်ခင်းတာဟာ လူတွေက ခင်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရဟန်းတော်များကသာ ခင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက ရဟန်းတော်များ ကထိန်ခင်းနိုင်အောင် သင်္ကန်းကို လှူဒါန်းပေးတဲ့ ကထိန်သင်္ကန်း အလှူရှင်အဖြစ်ပဲ ခံယူနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကထိန်ခင်းတာဟာ သံဃာတော်များရဲ့ အလုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကထိန်ခင်းဖို့အတွက် သံဃဿဒေမ ဆိုပြီး လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဒီသင်္ကန်းကို သံဃာတော်များက သိမ်ထဲမှာ ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခံမယ့် ကျောင်းမှာရှိတဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးကို သံဃာအများ သဘောတူမှုနဲ့ ရွေးချယ်ပြီး သင်္ကန်းအလှူရှင်များ လှူဒါန်းထားတဲ့ အဲဒီသင်္ကန်းကို ကမ္မ၀ါစာနဲ့ ရွတ်ဖတ်ကာ ပေးကြရပါတယ်။ အဲဒီလို ကမ္မ၀ါစာနဲ့ ရွေးချယ်ပေးလာတဲ့ သင်္ကန်းကို အလှူခံရရှိလာတဲ့ ရဟန်းတော်ဟာ မိမိဝါဆိုရာကျောင်းမှာ ပြန်ပြီးဒီသင်္ကန်းကို ခင်းရပါတယ်။
ခင်းတယ်ဆိုတာ သင်္ကန်းကို အောက်မှာချခင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စွန့်သင့်တဲ့သင်္ကန်းကို စွန့်၊ အဓိဋ္ဌာန်တင်သင့်တဲ့ သင်္ကန်းကို တင်ပြီး လက်ရှိအလှူခံ ရရှိလာတဲ့ သင်္ကန်းကို ၀ိနည်းကြောင်းအရ လိုက်နာပြုကျင့်တာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခင်းထားတဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကိုလည်း အဲဒီကျောင်းတိုက်မှာ ရှိတဲ့ အခြားသံဃာတော်များကို အနုမောဓနာပြု သာဓုခေါ်စေပြီး ၀ိနည်းကြောင်းအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကထိန်အာနိသင် ငါးမျိုးကို အညီအမျှ ရစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကမ္မ၀ါစာနဲ့ သင်္ကန်းပေးပြီး မိမိဝါဆိုရာ ကျောင်းတိုက်မှာ ကထိန်ပြန်ခင်းကာ အတူတူဝါဆိုဝါကပ် ပြုကြတဲ့ အခြားရဟန်းတော်များနဲ့အတူ အကျိုးအာနိသင်ကို ရယူတဲ့ အစီအစဉ်ကိုပဲ ခြုံငုံပြီး ကထိန်ခင်းတယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကထိန်ခင်းတယ်ဆိုတာ လူတွေက ခင်းရတာမဟုတ်ဘဲ ကထိန်ခံ ရဟန်းက ခင်းရတာလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကထိန်းသင်္ကန်းဟာ ဒီနေ့အလှူခံပြီး ဒီနေ့ပဲ အပြီးကံဆောင်ကာ ခင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အလှူခံပြီး နောက်နေ့တွေမှ ခင်းရင် ကထိန်ခင်းရာ မမြောက်ပါဘူး။ မသိုးသင်္ကန်းဆိုတာ ညလွန်သွားတဲ့ သင်္ကန်းမျိုး မဟုတ်တာကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မသိုးသင်္ကန်းဖြစ်မှလည်း ကထိန်ခင်းနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကန်းကလွဲပြီး တစ်ခြားပစ္စည်းများနဲ့လည်း ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုဆိုတော့ တခြားပပေဒသာပင် သီးပြီးလှူတဲ့ အလှူပစ္စည်းများဟာ အခြံအရံ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းများ၊ ပဒေသာပင်များဟာ ကထိန်ခင်းထိုက်တဲ့ အရာများ မဟုတ်ပါဘူး။ အလိုရှိသလို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အလှူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကထိန်ခင်းနိုင်တဲ့ သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒါန်းနိုင်သူများ
၀ိနည်းကြောင်းအရ ကထိန်းခင်းနိုင်တဲ့ သင်္ကန်းအမျိုးအစားဟာ ကြိုတင်လှူဒါန်းထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ တစ်လအတွင်းမှာ လှူဒါန်းတဲ့ ဒီနေ့လှူ ဒီနေ့ခင်းရမယ့် ညမလွန်တဲ့ မသိုးသင်္ကန်း ဖြစ်ရပါမယ်။ အဲဒီလို သင်္ကန်းမျိုးဆိုရင် သင်္ကန်းသုံးထည်လို့ ခေါ်တဲ့ အပေါ်ရုံ ကိုယ်ဝတ် ဧကသီသင်္ကန်း၊ အောက်ခါးဝတ် သင်းပိုင်သင်္ကန်းနဲ့ ပုခုံးတင် နှစ်ထပ်ဒုကုဋ်သင်္ကန်း တွေထဲက သင့်တော်ရာ တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ခင်းနိုင်ပြီး ဒီသင်္ကန်းအလှူကိုတော့ ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ ဘယ်သူမဆို လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
ကထိန်အလှူဟာ အမြတ်ဆုံး အလှူဖြစ်သလို ကထိန်အလှူ မြောက်ဖို့ဆိုတာလည်း ခက်ခဲတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဆရာဒကာ နားလည်မှုနဲ့ အကြောင်းစုံ ညီညွတ်မှ ဒီအလှူ အထမြောက် အောင်မြင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ၀ါကျွတ်ပြီးတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော် တစ်ပါးပါးဟာ မိမိကျောင်းမှာ ကထိန်မရှိ၊ ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းသူမရှိလို့ ဆိုပြီး နီးစပ်ရာ၊ ကြည်ညိုရင်းနှီးရာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံမှာ သွားပြီး အလှူခံကာ မိမိတို့ ပယောဂကြောင့် ရလာတဲ့ သင်္ကန်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီသင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။ ကထိန်သင်္ကန်းဟာ ရဟန်းတော်များ အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်အလှူခံကောင်းတဲ့ သင်္ကန်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကထိသင်္ကန်း အလှူရှင်က မိမိအလိုလို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သံဃာဿဒေမ - သံဃားတော်အား လှူဒါန်းပါ၏လို့ သံဃာကို ရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့သာ ကထိန်ခင်းနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်ဘုရားအတွက်၊ ဘယ်ဆရာတော်အတွက် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အလှူသင်္ကန်းနဲ့ဆိုလည်း ကထိန်းမခင်းနိုင်ပါဘူး။ ရဟန်းတော်များဘက်က ပယောဂကင်းဖို့လိုသလို သင်္ကန်းအလှူရှင်ဘက်ကလည်း သံဃိက အလှူဖြစ်ဖို့လိုကာ ဒီလို နှစ်ဘက်နားလည် ညီညွတ်မှုနဲ့ ရလာတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့သာ ကထိန်ခင်းနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကာလသတ်မှတ်ချက်ကလည်း တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါ၊ တစ်ခါမှာ သင်္ကန်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ တစ်လ၊ တစ်လမှာလည်း ၀ါဆိုရာ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ချက်မတူတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ခင်းနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကထိန်ခင်းဖို့အတွက် သိမ်ရှိဖို့လိုသလို လေးပါးလေးပါးအထက် ရှိတဲ့သံဃာ အရေအတွက် ပြည့်မီဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒီလို အကြောင်းအချက်အလက် စုံမှပဲ ကထိန်ခင်းမှု အထမြောက်တယ်၊ ကထိန်အလှူ အောင်မြင်ပြီးမြောက်တယ်လို့ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားအစရှိတဲ့ အရိယာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ ချီးမွမ်းမှုကို ခံယူထိုက်တဲ့အတွက် ဒီအလှူကို ကထိန်လို့ ဆိုကြောင်း အဋ္ဌကထာဆရာတော်က ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုဖွင့်ဆိုရတာကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒီအလှူဟာ
၁။ သံဃာကို ရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတဲ့ သံဃိကအလှူ ဖြစ်ရခြင်း
၂။ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက် အတွင်းမှာသာ လှူဒါန်းရတဲ့ ကာလဒါန အလှူဖြစ်ခြင်း
၃။ တစ်ခြားပစ္စည်းဝတ္ထုများ မဟုတ်ဘဲ အရဟတ္တဓဇ ခေါ် ရဟန္တာတို့ရဲ့ အလံတံခွန်သဖွယ် ဖြစ်တဲ့ အ၀တ်သင်္ကန်းနဲ့သာ ကထိန်ခင်းနိုင်ခြင်း
၄။ ဒီအလှူကို အကြောင်းပြုပြီး ရဟန်းတော်များအား ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ် အချို့ကို အချိန်ကာလ တစ်ခုအရ ကင်းလွတ်စေနိုင်တဲ့ အတွက် ၀ိနည်းအလှူ သို့မဟုတ် တရားအလှူခေါ် ဓမ္မဒါန အလှူဖြစ်ခြင်း စတဲ့ ထူးခြားချက်များကြောင့် အမြတ်ဆုံးအလှူ၊ အထူးခြားဆုံး အလှူလို့ ဖွင့်ဆိုပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအလှူရဲ့ လက်တွေ့အကျိုးကတော့ သင်္ကန်းအလှူခံ ရရှိတဲ့ ရဟန်းတော်များဟာ ကထိန်အာနိသင် ရလိုက်တဲ့အတွက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့ကစပြီး တပေါင်းလပြည့်နေ့အထိ (၅)လအတွင်းမှာ
၁။ ထင်ရှားရှိသော ရဟန်းကို မပန်ကြားဘဲ ဒါယကာ အိမ်သို့သွားနိုင်ခြင်း
၂။ တိစီဝရိတ် အဓိဋ္ဌာန်တင်ထားသော သင်္ကန်းကို မယူဘဲ သွားနိုင်ခြင်း
၃။ ထမင်းစားလာပါ၊ မုန့်စားကြွပါ စတဲ့ လူ့အခေါ်အပြောနဲ့ ပင့်ဖိတ်တဲ့ ဂဏဘောဇဉ်ကို စားနိုင်ခြင်း
၄။ အလိုရှိတိုင်း အဓိဋ္ဌာန် ၀ိကပ္ပနာမပြုသော သင်္ကန်းကို ဆောင်နိုင်ခြင်း
၅။ ကထိန်ခင်းတဲ့ကျောင်းမှာ သံဃိက သင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ကထိန်အာနိသင်ရတဲ့ ရဟန်းအားလုံး ရယူနိုင်ခြင်း ဆိုတဲ့ အကျိုးတရား ငါးပါးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းခြင်းကို အကြောင်းပြုပြီး
၁။ သင်္ကန်းအလှူ လှူဒါန်းခွင့်ရခြင်း (စီဝရဒါန)
၂။ သံဃိကအလှူ လှူခွင့်ရခြင်း (သံဃိကဒါန)
၃။ ကာလဒါန အလှူလှူခွင့်ရခြင်း (ကာလဒါန)
၄။ ဓမ္မဒါနအလှူ လှူခွင့်ရခြင်း (ဓမ္မဒါန) စတဲ့ အကျိုးတရားများကို ရစေနိုင်တဲ့အပြင် ရဟန်းတော်များအား အထက်ပါ ကထိန်အာနိသင် အကျိုးတရား ငါးမျိုးကို ရစေနိုင်သလို ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းတဲ့ အလှူရှင်များမှာလည်း ထိုအကျိုးနဲ့ ထပ်တူစွာ လွတ်လပ်တဲ့ဘ၀မျိုးမှာ ဖြစ်ရခြင်း၊ ထောင်တန်းအချုပ်အနှောင်မှ ကင်းလွတ်ခြင်း၊ စားဖွယ်သောက်ဖွယ် ပေါများကာ အလိုရှိသလို စားသုံးနိုင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို သူတပါးတို့ မလွမ်းမိုးနိုင်ခြင်း၊ မိမိကသာ နေရာတကာ အစိုးရခြင်း စသော အကျိုးတရားများကိုလည်း ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးကတော့ ရှားရှားပါးပါး ခက်ခက်ခဲခဲ လှူဒါန်းရတဲ့အလှူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရဖို့ခဲရင်းတဲ့ အရာတွေကို ရနိုင်ပြီး နောက်ဆုံး အခက်ခဲဆုံးဖြစ်တဲ့ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကိုပါ အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးတရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတော်ကောင်းများက ဒီကထိန်အလှူဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အမြတ်ဆုံးအလှူလို့ ဆိုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကထိန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိသင့်သမျှကို အနည်းငယ်မျှ သိရှိခွင့် ရလောက်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ တစ်ချို့အကြောင်းအရာများဟာ အကျယ်ရှင်းပြဖို့ လိုပေမယ့် လူတွေအတွက်တော့ ကထိန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလောက်သိထားရင်ကိုပဲ ကထိန်အလှူအကြောင်း၊ ကထိန်လုပ်ရခြင်းအကြောင်း၊ ကထိန်အလှူရဲ့ အကျိုးတရားများအကြောင်း အတော်အသင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ်သိလိုသူတွေ အနေနဲ့တော့ ၀ိနည်းမဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်၊ ကထိနက္ခန္ဓကမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ (သို့) အနှစ်သာရရှိရှိ ကုန်ဆုံးသင့်တဲ့နေ့
။ အချိန် 10/11/2011 11:38:00 AM
မနက်ဖြန် (၁၂-၁၀-၂၀၁၁)ဟာ မြန်မာ့ပြက္ခဒိန် သတ်မှတ်ချက်တွေအရ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၃ခုနှစ်ရဲ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေပဲ ဖြစ်သလို ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲတော်တွေအရလည်း အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ဖြစ်ကာ ဥပုသ်သီတင်း စောင့်သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း ထူးခြားတဲ့ ဥပုသ်နေ့ အခါသမယ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသားတော် ရဟန်းသံဃာတော်များ အတွက်တော့ ညီညွတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဖိတ်ခေါ်ရင်း တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သိမ်အတွင်းမှာ စုပေါင်းပြီး ကံဆောင်ကြမယ့် ပဝါရဏာနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ကား ဒီသီတင်ကျွတ်လပြည့်နေ့လို နေ့ထူးနေ့ရက်တစ်ခုဟာ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့မှ ကောင်းမှုကုသိုလ် တစ်ခုခုကို လုပ်ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ကုသိုလ်ပြုရာ နေ့တစ်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကုသိုလ် အလုပ်တွေမှာဆိုရင် အချိန်မရွေး၊ အခါမရွေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေ လုပ်တတ်ကြပေမယ့် ကုသိုလ်အရေးဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့၊ ဘာနေ့မဟုတ်လို့၊ ညာနေ့မဟုတ်လို့ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ရက်ကောင်းရက်မြတ်တွေကို ရွေးလေ့ရှိတတ်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အထူးခြားဆုံး နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်လို့ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ကောင်းမှုတစ်ခုခုတော့ ရအောင်ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားမှုတွေ ပေါင်းစုံထားတဲ့ ဒီသီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဟာ ရဟန်းသံဃာတော်များရဲ့ ပုရိမဝါဆိုဝါကပ်ရာ သီတင်းကာလ ကျွတ်လွတ်ပြီးဆုံးခြင်းကို ရည်ညွန်းထားသလို မြတ်စွာဘုရားရှင် (၇)ဝါမြောက်မှာ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်သို့ ကြွရောက်ကာ မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သန္တုသိတနတ်သားကို ဝါတွင်းသုံးလ ကာလပတ်လုံး အဘိဓမ္မာဒေသနာတော် ဟောကြားချီးမြင့်ပြီးလို့ လူ့ပြည်ကို ပြန်လည်ကြွရောက် ဆင်းသက်တော်မူတဲ့ အဘိဓမ္မာ ဓမ္မသဘင်ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုလည်း ဖော်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဓိဋ္ဌာန်တစ်ခု အနေနဲ့ ကုသိုလ်ပြုကာ ပူဇော်လိုသူတွေအဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်အခါ သမယပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုဟိုဒီဒီ ကိစ္စတွေနဲ့ ကုသိုလ်အရေးကို အလေးမပေးနိုင်သူတွေအနေနဲ့ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာတော့ ဥပုသ်သီလလေးဆောက်တည်ပြီး ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကို ရွတ်ဆိုပူဇော်ကာ တရားလေးလည်းနာ၊ ဝိပဿနာ အလုပ်လေးလည်း တတ်နိုင်သမျှ အားထုတ်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် အလွန်တန်ဘိုးရှိတဲ့ နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်သွားမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကို ပူဇော်တဲ့ ပူဇော်မှုတွေထဲမှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီး ပူဇော်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အနှစ်အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဝမှာ ထူးထူးခြားခြား ပူဇော်မှုတစ်ခုအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဓိဋ္ဌာန်ပြုကာ ဘုရားရှင်ကို ကုသိုလ်အစုနဲ့ ပူဇော်သမှု ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်အတွက်တော့ တကယ့်ကိုပဲ အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တစ်ခု ဖြစ်သွားမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ကား ဟိုအလုပ်၊ ဒီအလုပ်၊ ဟိုကိစ္စ၊ ဒီကိစ္စစတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ ဟိုဟာမလုပ်နိုင်၊ ဒါမလုပ်နိုင် ဖြစ်နေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အတော်များများ အနေနဲ့လည်း အထူးစဉ်းစားသင့်တာက အချိန်ဆိုတာ ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်၊ အလုပ်ဆိုတာ ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဖြစ်ကိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဆင်ခြင်ပြီး ကိုယ့်ဘဝမှာ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ ကုသိုလ်အလုပ်ကို မအားတဲ့ကြားက ခက်ခက်ခဲခဲ ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သစ္စာပြုချက်နဲ့ ချိန်ထိုးလိုက်ရင် အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘူးဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိမြင် ခံစားနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ဆိုတာ အထူးသဖြင့် ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာ ယုံကြည်တဲ့ သဒ္ဓါတရား၊ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတရား၊ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ဝီရိယတရား စတာတွေနဲ့ ပေါင်းစုနိုင်မှ အကောင်းအစုတွေဆိုတာလည်း အကောင်အထည်ပေါ်ကာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မကောင်းမှုမှာ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို မလုပ်ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ထူးကို လုပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင်း ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ထူးမှာ ပျော်မွေ့နိုင်အောင် တွန်းအားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင် ဘာတွန်းအား၊ ဘာဖိအား၊ ဘာအကူအညီမှ မလိုဘဲ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး လုပ်ဖြစ်တတ်ကြပေမယ့် ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင် တွန်းအားလေးတွေ၊ အကြောက်တရားလေးတွေနဲ့မှ လုပ်ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ သတ္တဝါတွေအတွက် ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ် သတိပြုဆင်ခြင်ပြီး ဘဝမှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို အခက်အခဲတွေကြားက ရအောင်ယူဖူးတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ကျောက်တစ်ခု တင်နိုင်ဖို့အတွက် မနက်ဖြန် (၁၂-၁၀-၂၀၁၁)မှာ ရောက်လာမယ့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့လို နေ့ထူးနေ့မြတ်မျိုးမှာ ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ကာ တတ်နိုင်သမျှ ဒါန၊ သီလ၊ သမထ၊ ဝိပဿနာ အကျင့်တရားများကို ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါရန် အသိပေးတိုက်တွန်းရင်း ဘုန်းဘုန်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တစ်ခုမှာ ဘုန်းဘုန်းအနေနဲ့လည်း သံဃာတော်များရဲ့ ပဝါရဏာပွဲမှာ ဘုရားသားတော် ရဟန်းတစ်ပါး အနေနဲ့ အခြားအခြား အခက်အခဲများ ရှိနေပေမယ့် မဖြစ်မနေ ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ အဓိဋ္ဌာန် ပြုထားသလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်ကောင်းများ အနေနဲ့လည်း တတ်နိုင်သမျှ ဥပုသ်သီတင်းသီလများကို စောင့်ထိန်းပြီး ရသမျှ ကုသိုလ်များကို ပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ ထပ်မံတိုက်တွန်းကာ သတိပေး နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
မနက်ဖြန် သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့မှာ ကုသိုလ်တစ်ခုခု ပြုကြပါစို့ သူတော်ကောင်းတို့….။
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၂၄)
။ အချိန် 10/08/2011 01:03:00 PM
ဒကာတစ်ယောက်က “အရှင်ဘုရား ဝါဆိုချိန်နီးလာပြီဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ဝါတွင်းကာလမှ အိမ်မပြောင်းရ၊ အိမ်မရွေ့ရစတဲ့ အယူအဆတွေကြောင့် ဝါမဆိုခင်ကတည်း ဒီကိစ္စအတွက် အပြီးလုပ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘုရားဟောထားတာ ရှိသလား၊ ဒီအယူအဆတွေကို လိုက်ပြီးလုပ်သင့်သလား၊ မလုပ်သင့်ဘူးလား စသဖြင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သိလိုပါတယ်ဘုရား” စသဖြင့် မေးလျှောက်ဖူးလို့ ပြန်ပြီးဖြေပေးဖူးပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီဒကာမေးလျှောက်သလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝါတွင်းကာလနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရိုးစွဲနေတဲ့ အမှားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အယူအဆ အမှားတွေဟာ ကြာတော့ဘုရားပဲ ဟောသလိုလို၊ ကျမ်းဂန်တွေမှာပဲ ပါသလိုလို ဖြစ်ကုန်တာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒီအများကြီးတွေထဲက မေးခွန်းရှင်မေးထားသလို၊ ဝါတွင်းကာလ အိမ်မပြောင်းရ၊ အိမ်မရွေ့ရ၊ အိမ်မဆောက်ရ စတာတွေလည်းရှိသလို ဝါတွင်းကာလ အိမ်ထောင်မပြုရ ဆိုတာတွေတောင် ပါနေပါသေးတယ်။ ဒီအယူအဆတွေဟာ ဘုရားဟောထဲမှာ မပါတဲ့၊ ဘုရားဟောနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ လောကီအယူအဆတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါတွင်းကာလမှာ အိမ်ပြောင်းရင်၊ အိမ်ရွှေ့ရင် ဘာဖြစ်မယ်၊ ညာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေ၊ လောကဓာတ်ဆရာတွေရဲ့ ဟောပြောမှုတွေကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ လူအတော်များများက ရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးတာတို့၊ ဝါမဆိုခင်၊ ဒါမှမဟုတ် ဝါကျွတ်ပြီးမှ လုပ်တာတို့ စတာတွေ ဖြစ်လာကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှေးတုန်းကတော့ ရာသီဥတု အနေအထားအရ ဝါတွင်းဆိုတာ မိုးတွင်းကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာ အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ရင် ပိုပြီးဒုက္ခများနိုင်တဲ့အတွက် ချောက်ချောက်သွေ့သွေ့ဖြစ်တဲ့ မိုးမကျခင်ကာလ ဒါမှမဟုတ် မိုးရာသီပြီးမှ လုပ်ကြတဲ့ အစဉ်အလာတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါက ရာသီဥတု အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဗေဒင်ဆရာ၊ ယတြာဆရာ၊ နက္ခတ္တဆရာ စတဲ့လောကဓာတ် ဆရာတွေရဲ့ အာဘော်တွေ၊ ဒီလောကဓာတ် ဆရာတွေရဲ့ အယူအဆကို ယုံကြည်သူတွေကြောင့် ဝါတွင်းကာလ အိမ်မပြောင်းကောင်းတာတို့၊ အိမ်မရွှေ့ကောင်းတာတို့၊ အိမ်မဆောက်ကောင်းတာတို့၊ အိမ်ထောင် မပြုကောင်းတာတို့ စတာတွေ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုခေတ်စားလာတာတွေဟာ ဘုရားဟောမှာပါလို့ လုပ်ကြတာတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။
ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာ မလုပ်ကောင်းဘူး၊ ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်ရမယ် စသဖြင့် ဟောထားတာ မရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုမင်္ဂလာ၊ ဘယ်လိုနက္ခတ်တွေနဲ့ အညီမှ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီလို နည်းတွေကိုလည်း ဘုရားမြတ်စွာက အားမပေးပါဘူး။ အဲ နက္ခတ်၊ မင်္ဂလာ စတဲ့အယူအဆတွေ သိပ်ပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတဲ့အကျင့်ကို များများကျင့်ကြဖို့ပဲ မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဒီစကားတော်ကို ပရိတ်ကြီး၊ ပုဗ္ဗဏှသုတ်မှာ လာတဲ့စကားတော်က အထင်းအရှား ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီသုတ်တော်မှာ ဘုရားရှင်က “ကောင်းမြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်နေသူများအဖို့ အမြဲတမ်း နက္ခတ်ကောင်းပါတယ်၊ အမြဲတမ်း ကျက်သရေမင်္ဂလာ ရှိပါတယ်၊ အမြဲတမ်း ကောင်းသော မိုးလင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ အမြဲတမ်း ကောင်းသော အိပ်ရာထခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ အမြဲတမ်း ကောင်းသော အချိန်အခါ ဖြစ်ပါတယ်၊ အမြဲတမ်း ကောင်းသော ပူဇော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဟောကြားတော်မူထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် အိမ်အပြောင်းအရွှေ့ ပြုလုပ်ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာ အထူးမိန့်တော် မူထားတာ မရှိပေမယ့် အိမ်သစ်တက်တဲ့အခါ၊ မြို့ရွာအသစ်တည်တဲ့ အခါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်မှာ မိန့်တော်မူထားတဲ့ ဘုရားစကားတော် ရှိပါတယ်။ ဒီသုတ်တော်မှာ ဘုရားရှင်က “ပညာရှိသည် အကြင်အရပ်၌ အိမ်ရာဆောက်လုပ်နေထိုင်၏၊ ဤအရပ်၌ သီလရှိသော၊ ကိုယ်နှုတ်နှလုံး စောင့်သုံးသော၊ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဆွမ်းကျွေးပြီးလျှင် ထိုအရပ်၌ ရှိသောနတ်တို့အား အလှူ၏ အဖို့ကို အမျှဝေရာ၏၊ ဤသို့ အမျှပေးဝေလတ်သော် နတ်တို့သည် ပူဇော်ခံရသဖြင့် ထိုအမျှပေးဝေသူကို အတုန့်ပြန်၍ ပူဇော်ကုန်၏၊ မြတ်နိုးခံရသဖြင့်လည်း အတုန့်ပြန်၍ မြတ်နိုးကုန်၏၊ ထို့ကြောင့် မိခင်သည် ရယ်ဝယ်သားကို စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ ထိုအမျှဝေသူကို စောင့်ရှောက်၏၊ နတ်တို့စောင့်ရှောက်ခံရသောသူသည် အခါခပ်သိမ်း ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတို့ကိုသာ တွေ့မြင်ရလေ၏” လို့ ဟောကြားတော်မူထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီစကားတော်အရ အိမ်အသစ်တက်တဲ့အခါ၊ နေရာအသစ် ပြောင်းတဲ့အခါမှာ အိမ်တက်အလှူစတာတွေ လုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်မျိုးကတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်နဲ့လည်း ညီညွတ်လှတဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့အစဉ်အလာလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်ကာလမှာ ဘာမလုပ်ကောင်းဘူး ဆိုတာတွေကတော့ ဘုရားဟောနဲ့ မညီသလို၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကံတရားတွေကို မယုံကြည်ကြလို့ပဲလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ အခါကာလတွေ ပြောကြကြေးဆိုရင် ဝါးတွင်းဝါပတွေ ရွေးစရာမလိုပါဘူး။ မကောင်းတာလုပ်တဲ့ သူတွေအတွက် အချိန်တိုင်းဟာ မကောင်းတာတွေ ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီး ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက် အချိန်တိုင်းဟာ အကောင်းတွေပဲ ဖြစ်နေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်အိမ်ပြောင်းပြောင်း ကိုယ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင် မကောင်းတာတွေကို တွေ့ကြုံလာရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကကောင်းနေမယ်ဆိုရင် ဝါတွင်းမှမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်အချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ဝါတွင်းကာလ၊ အိမ်မပြောင်းရ၊ အိမ်ထောင်မပြုရ စတဲ့အယူအဆတွေဟာ ဘုရားဟောအရ လုပ်ကြတာမဟုတ်ဘဲ၊ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေကြောင့်နဲ့ ခေတ်စားလာတဲ့ လောကဓာတ်ဆရာတွေရဲ့ အယူအဆတွေကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ အယူသည်းလာကြတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားဟောအနေနဲ့ကတော့ တကယ်လို့ နက္ခတ်၊ မင်္ဂလာတွေ ရွေးကြကြေးဆိုရင် ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေ လုပ်နေခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့နက္ခတ်၊ ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာ စတာတွေ ဖြစ်နေကြမှာ ဖြစ်ပြီး မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာ မကောင်းတဲ့ အတိတ်နိမိတ်တွေ ဖြစ်နေကြမှာ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားကြရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီလို ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်ကာလစတာတွေ ရွေးကြဖို့ထက် ဘယ်လိုမကောင်းမှုကို ဘယ်လိုရှောင်ကြဉ်ကြည့်ကြမယ်၊ ဘယ်လိုကောင်းမှုမျိုးကို ဘယ်လိုရှာပြီး လုပ်ကြမယ် စသဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းကသာ ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဝါတွင်းကာလ ဘာမလုပ်ရ၊ ညာမလုပ်ရ စတဲ့အယူအဆတွေဟာ အရိုးစွဲနေတဲ့ ရှေးအယူအဆများနဲ့ ဗေဒင်နက္ခတ် စတဲ့ လောကဓာတ်ဆရာတွေရဲ့ အယူအဆများသာ ဖြစ်ပြီး ဘုရားဟော အယူအဆ မဟုတ်တဲ့အပြင် ဘုရားဟောနဲ့လည်း မညီတဲ့အလုပ်များ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုအယူအဆတွေမှာ အာရုံမထားကြဘဲ တကယ်အလေးထားရမှာက မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်များကိုသာ အလေးထားရမှာဖြစ်ကာ ကောင်းတဲ့အလုပ်၊ ကောင်းတဲ့အကျင့်များ လုပ်နေကြတဲ့ အချိန်တိုင်းဟာ ကောင်းတဲ့ ရက်ကောင်းရက်မြတ် အချိန်ကောင်းများပဲ ဖြစ်ပြီး မကောင်းတဲ့ အလုပ်များကို လုပ်နေတဲ့ အချိန်တွေဟာ မကောင်းတဲ့ နက္ခတ်၊ အမင်္ဂလာ အချိန်တွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝါတွင်းကာလ ဘာမလုပ်ရ၊ ညာမလုပ်ရ စတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အယူအဆတွေ လိုက်နေကြမယ့်အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် နေကြည့်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း အမေးကြည့်၍ အဖြေညှိပေးရင်း လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတစ်ခုအဖြစ် အလွဲပြ၍ အမှန်မျှလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 10/05/2011 11:02:00 AM
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဗုဒ္ဓကိစ္စများနဲ့ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပုံတွေကို ဖတ်ရှုကြည်ညိုရင်း ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းရတဲ့ အချိန်လေးတွေကို သတိတရ ဆင်ခြင်နေမိခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တွေရဲ့ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးသမျှ အချိန်တွေကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ “(၁) နံနက်ပိုင်းမှာ ဆွမ်းခံကြွတော်မူခြင်း၊ အလှူရှင်တို့အား အခွင့်အားလျော်စွာ အနုမောဒနာပြုခြင်း ပုရေဘတ္တကိစ္စ (၂) နေလွဲအခါနဲ့ ညနေပိုင်းမှာ ပူဇော်ရန် ရောက်လာသူတို့ရဲ့ အပူဇော်ခံပြီး သင့်တော်တဲ့ တရားဟောခြင်း ပစ္ဆာဘတ္တကိစ္စ၊ (၃) ညာဉ့်ဦးယံမှာ ရဟန်းတို့အား တရားဟောခြင်း၊ ကမ္မဌာန်းပေးခြင်းစတဲ့ ပုရိမယာမကိစ္စ၊ (၄) သန်းခေါင်ယံမှာ စကြာဝဠာ တိုက်တစ်သောင်းမှ လာရောက်ကြတဲ့ နတ်၊ဗြဟ္မာတွေရဲ့ အမေးပုစ္ဆာပြဿနာတို့ကို ဖြေဆိုတော်မူခြင်း မဇ္ဈိမယာမကိစ္စ၊ (၅) မိုးသောက်ယံမှာ စင်္ကြံကြွတော်မူခြင်း၊ လျောင်းစက်ကျိန်းတော်မူခြင်း၊ နိရောဓသမာပတ် ဝင်စားတော်မူခြင်း၊ သမာပတ်မှ ထတော်မူတဲ့ အရုဏ်တက်ခါနီးအချိန် ယနေ့ ချွတ်ထိုက်တဲ့ သတ္တ၀ါကို ဗုဒ္ဓစက္ခုဖြင့် လောက(၃)ပါးကို ကြည့်တော်မူခြင်း ပစ္ဆိမယာမကိစ္စ” ဆိုတဲ့ နေ့စဉ် ဗုဒ္ဓကိစ္စများနဲ့ပဲ (၄၅)ဝါလုံးလုံး ကုန်ဆုံးတော်မူခဲ့တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်တွေရဲ့ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးချိန်တွေဟာ အများအတွက်၊ ဝေနေယျတွေ အတွက်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းအပါအဝင် သတ္တဝါအတော်များများရဲ့ တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုတွေကတော့ တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှအကျိုးမရှိ အချည်းနှီးနဲ့ ဖြတ်သန်းနေကြသလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အကျိုးမရှိဆို ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးမရှိ၊ တခြားသူအတွက်လည်း အကျိုးမရှိဘဲ ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ အဖြစ်တွေတောင် ရှိနေတတ်ပါသေးတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်ရင် ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဟိုဟာလည်းမဟုတ်၊ ဒါလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ ကုန်သွားတာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ တစ်နေ့တာ အချိန်ဟာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ မကောင်းတဲ့ အကုသိုလ်တွေနဲ့ မဖြတ်သန်းခဲ့ဘူး ဆိုရင် ဒါဟာ အဆိုးထဲကအကောင်း အနေနဲ့ တော်သေးတယ်လို့တောင် ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တစ်နေ့တာဟာ ကုသိုလ်နဲ့ ဖြတ်သန်းခြင်း မဟုတ်တာတောင်မှ အကုသိုလ် အလုပ်တွေနဲ့ မဖြတ်သန်းမိဘူးဆိုရင် မဆိုးလှဘူးလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်နဲ့ မဖြတ်သန်းမိလို့ ကုသိုလ်မရရုံပဲ ရှိပေမယ့် အကုသိုလ်နဲ့သာ ဖြတ်သန်းမိရင်တော့ အကုသိုလ်အပြစ်တွေပါ ရရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရှိ သူတော်ကောင်းများကတော့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လို့မှ ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ကျန်းမာရေး၊ စည်စိမ်ဥစ္စာ၊ စိတ်စွမ်းအားတန်ခိုး ဒီငါးမျိုးထဲက တစ်ခုမှကို မရလိုက်ဘူးဆိုရင် အဲဒီနေ့ဟာ အကျိုးမရှိ အချည်းနှီးဖြစ်တဲ့ နေ့ပဲလို့ ဆုံးမလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လို့မှ ကုသိုလ်တစ်ခုခု မရလိုက်ဘူး၊ လောကီလောကုတ္တရာ ပညာ တစ်ခုခုမှ မရလိုက်ဘူး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလည်း မရှိလိုက်ဘူး၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရှာဖွေမှုလည်း တစ်ခုမှ မလုပ်ဖြစ်ဘူး၊ စိတ်အစဉ် တည်ငြိမ်မှု၊ စိတ်စွမ်းအား တိုးတက်မှု တစ်ခုခုကိုလည်း တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ တစ်နေ့တာဟာ အကျိုးမပြီး အချည်းနှီးကုန်ဆုံးခြင်းပဲလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အချည်းနှီး အကျိုးမရှိဖြစ်စေတာက အဲဒီငါးမျိုးထဲက တစ်ခုမှကို ရအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် အကုသိုလ်အလုပ်တွေနဲ့ပဲ တစ်နေ့တာကို ကုန်ဆုံးခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဘာနဲ့မှ အစားထိုးလို့ မရတဲ့ အချည်းနှီးကုန်းဆုံးမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကား ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုဟာ အကျိုးကြီးဖို့ထက် အကျိုးမယုတ်အောင် အရင်လုပ်ဖို့ လိုလာတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်ဟာ အကုသိုလ်အလုပ်တွေနဲ့ မကုန်မိအောင် အရင်ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ရာက နိုးထမှုကနေ အိပ်ရာဝင်သွားတဲ့အထိ တစ်နေ့တာ အချိန်တွေကို အကုသိုလ် အလုပ်၊ အကုသိုလ်အပြော၊ အကုသိုလ် အတွေးတွေနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းကုန်ဆုံး မသွားရအောင် ကြိုးစားကြဖို့ လိုပါတယ်။ အိပ်ရာက နိုးနိုးချင်း မကောင်းတဲ့အတွေး၊ ကိလေသာအတွေးက အရင်စဖြစ်လာမယ်၊ အဆဲလေးနဲ့ နှုတ်ဆက်ကြမယ်၊ အရက်ခွက်လေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ကြမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တာရဲ့ အစဟာ အကုသိုလ်တွေနဲ့ စလိုက်သလို ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ကုသိုလ်ဖြစ်စရာ အကျင့်လေးတွေ မလုပ်ဖြစ်တောင်မှ ဒီလိုအကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေနဲ့ တစ်နေ့တာကို မစမိအောင် လေ့ကျင့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာရဲ့ အစဟာ အကုသိုလ်နဲ့ စမိပြီဆိုရင် အကုသိုလ်ရဲ့ သဘောက လုပ်မိသွားရင် လက်ရဲ့ဇက်ရဲ့ဖြစ်ပြီး ဆက်တိုက် လုပ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်း အကုသိုလ်အပြစ်တွေကို မကြောက်မရွံ့ လုပ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်နေ့တာရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုဟာ အကျိုးမရှိဘဲ အရှုံးနဲ့ ဖြတ်သန်းမိသလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာကို ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ၊ အကျိုးကြီးတာတွေနဲ့ မဖြတ်သန်းနိုင်တောင်မှ အကုသိုလ်အပြစ်တွေနဲ့ မဖြတ်သန်းမိအောင် ကြိုးစားကြဖို့ ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ကိုယ်ရဲ့တစ်နေ့တာကို အကုသိုလ်အပြစ်တွေနဲ့ မဖြတ်သန်းမိအောင် အရင်ကြိုးစားပြီးရင်တော့ တစ်ဆင့်တက်ပြီး ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ တစ်နေ့တာမှာ အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ရဖို့အတွက် သူတော်ကောင်းများ ဆုံးမသလို ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခု၊ ပညာတစ်ခုခု၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတစ်မျိုးမျိုး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု တစ်ခုခုနဲ့ စိတ်အစဉ်ကောင်းမွန်စေမှု တစ်ခုခုကို အရယူနိုင်အောင် ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တစ်ခုခုလို့ ဆိုတဲ့အတွက် သိန်းထောင်နဲ့ချီပြီး လုပ်ရမဲ့ကုသိုလ်မျိုးလို့ မတွေးပါနဲ့။ ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ လုပ်လို့ရတဲ့ ကုသိုလ်မျိုးလေးကို လုပ်မိရင်ကိုပဲ ဒါဟာ အဲဒီနေ့အတွက် အကျိုးရှိသွားတာပါပဲ။ ဆိုကြပါစို့ မနက်အိပ်ရာက နှိုးတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဘုရားကို အာရုံပြုပြီး နမော တဿ ဘုရားရှိခိုးလေးတွေ ရွတ်လိုက်တာ၊ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ စသဖြင့် သရဏဂုံလေးတွေ ရွတ်လိုက်ကြတာ၊ သတ္တဝါအားလုံး ဘေးရန်ကင်းစေဖို့ မေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ မေတ္တာလေး ပို့ကြည့်လိုက်တာ၊ ဘုရားသောက်တော်ရေလေး ကပ်လှူလိုက်တာ စသဖြင့် ဘာမှမကုန်ဘဲ လုပ်လို့ရတဲ့ ကုသိုလ်လေးတွေ အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီကုသိုလ်တစ်မျိုးမျိုးကို လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး တစ်နေ့တာကို အစပြုကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီနေ့ဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ အကျိုးရှိတဲ့ နေ့ပါပဲ။
ဒီလိုပဲ တစ်နေ့တာကို ကုသိုလ်တစ်ခုခု ရအောင်လုပ်ပြီး ဖြတ်သန်းမှု မလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှ အပြစ်ကင်းတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုခုရအောင် ကြိုးစားတာ၊ အပြစ်ကင်းတဲ့ စည်းပွားဥစ္စာတစ်ခုခု ရအောင် ရှာဖွေနိုင်တာ၊ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး တစ်ခုခုကို အသိသတိယှဉ်ပြီး စောင့်ရှောက်လိုက်တာ၊ တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို အခြေခံတဲ့ တည်ငြိမ်မှု၊ ကိုယ့်စိတ်ကို ရင့်ကျက်အောင် လေ့ကျင့်မှု တစ်ခုခု လုပ်လိုက်တာ စတာတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ရင်လည်း ဒါဟာ အကုသိုလ်အပြစ်သာ ကင်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်တော့ အမြတ်ထွက်တဲ့နေ့၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ဖြတ်သန်းတဲ့နေ့လို့ပဲ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ အကောင်းဆုံး တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုကတော့ အိပ်ရာက နိုးချိန်ကစပြီး အိပ်ရာထဲဝင် အိပ်ပျော်သွားတဲ့အထိ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နှုတ်အမူအရာတွေကို သတိမလွှတ်စေဘဲ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှ အသိကပ်ပြီး ကုန်ဆုံးသွားမှုမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကုန်ဆုံးမှုဟာ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုကို သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တဲ့ သတိကပ်ပြီး ကုန်ဆုံးမှုဖြစ်တဲ့အတွက် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ တရားပါပြီး ကုန်ဆုံးသွားမှုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ အဲဒီလို သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ တစ်နေ့တာကို ကုန်ဆုံးဖို့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ တရားပဲ အားထုတ်နေရမလိုမျိုး ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေရာမှာထိုင်ပြီး တရားမှတ်နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေမှာပဲ အသိပ်ကပ်ပြီး လိုက်သိလိုက်လုပ်နေဖို့ကို ပြောလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှမှာ ကိလေသာ ကြားမခိုအောင် လက်ခြေလှုပ်ရင်လည်း သတိထားလှုပ်ဖို့၊ အလုပ်လုပ်ရင်လည်း သတိထားလုပ်ဖို့၊ စကားပြောရင်လည်း သတိထားပြောဖို့၊ စိတ်ရဲ့ အတွေးအကြံတွေကိုလည်း သတိထားပြီး ဒီအတွေးအကြံကို သိနေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ်နှုတ်အမူအရာတွေကို သတိကပ်ပြီး ကုန်ဆုံးနေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ တစ်နေ့တာမှာ ကိလေသာကြားမခိုဘဲ အသိတရားနဲ့ ကုန်ဆုံးစေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံး တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုပဲလို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက လူတိုင်းလူတိုင်း နေ့စဉ်ကုန်ဆုံး ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ တစ်နေ့တာပေါင်းများစွာကို အကျိုးမပြီး အချည်းနှီး ဖြတ်သန်းမှုမျိုး မဖြစ်အောင် အကုသိုလ်ကိုရှောင်ပြီး ကုသိုလ် ပညာစတဲ့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုခုနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးမှုကို အကျိုးကြီးအောင် ကုန်ဆုံးစေတဲ့ ကုန်ဆုံးမှုမျိုး မလုပ်နိုင်တာတောင်မှ အကျိုးယုတ်တဲ့ ကုန်ဆုံးမှုမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ပထဆုံး အကုသိုလ်တွေနဲ့ မဖြတ်သန်းမိအောင် ကြိုးစားပြီး နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်စွမ်းအား တစ်မျိုးမျိုးကို ရအောင်ကြိုးစားရင် တစ်နေ့တာကို အမြတ်ထွက်အောင် ကြိုးစားကြည့်ဖို့ အသိပေးလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနဲ့ အကျိုးအကြီးဆုံး ဖြတ်သန်းမှုကတော့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာနဲ့ စိတ်အမူအရာတွေမှာ သတိကပ်ပြီး အသိအကျင့် ထပ်တူဖြစ်အောင် နေထိုင်လေ့ကျင့်ကာ ဖြတ်သန်းမှုပဲဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကုန်ဆုံးမှုပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ သတ္တဝါများ အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုများကို တန်ဘိုးရှိရှိ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြဖို့ မိမိတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာများမှာ မကောင်းမှုအကုသိုလ် အပြစ်များနဲ့ ကုန်ဆုံးမှုမျိုး မဖြစ်ရအောင် အရင်ဆုံး ကြိုးစားကြပြီး ကုန်ဆုံးမှုတိုင်းမှာ အကျိုးအမြတ် ထွက်ကြစေဖို့ ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ၊ ကျန်းမာ၊ တန်ခိုး တစ်မျိုးမျိုးကိုလည်း ရနိုင်သမျှ ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်း အကောင်းဆုံး တစ်နေ့တာကို ကုန်ဆုံးခြင်းအဖြစ် ကိုယ်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ သတိတရားကို လိုက်ကိုင်ထားပြီး ကိလေသာကြားမခိုအောင် အသိအကျင့်ထပ်တူ ဆင့်နိုင်အောင်သာ လေ့ကျင့်နေထိုင် ဖြတ်သန်းကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးတိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 10/03/2011 10:45:00 AM
အစာမကြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို အစားအသောက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုသုံးနှုံးကြတာ ရှိသလို ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အဲဒီစကားလုံးကို တစ်ခြားအဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးနဲ့ သုံးလာတာလည်း ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြား ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ မကျေနပ်ချက်လေးတွေ၊ သဘောမကျတာလေးတွေ၊ စိတ်ထဲမှာ မျက်နေတာလေးတွေကိုလည်း အစာမကြေဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ “သူ မင်းကို အစာမကြေဖြစ်နေတယ်၊ မင်း..ငါ့အပေါ် ဘာအစာမကြေ ဖြစ်လို့လဲ..”စသဖြင့် ပြောဆိုသုံးနှုန်းလာတာ ကြားရတတ်ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျနဲ့ ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေတာ၊ မကြေမချမ်းဖြစ်နေတာ၊ အလိုမကျ ဖြစ်နေတာလေးတွေ ရှိနေတာကိုပဲ အစာမကြေ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ အစာမကြေတာလေးတွေ များလာမယ်ဆိုရင်တော့ ကြာရင် နာကျင်ပေါက်ကွဲလာတဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုစရာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဟုတ်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းများ၊ အစုအဖွဲ့များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ အတူတူ နေထိုင်လုပ်ကိုင် ကျင်လည်ကြရတဲ့ သူအတော်များများကို ကြည့်လိုက်ရင် ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေ မဟုတ်ဘဲ အခုမှလာပြီး အလုပ်သဘောအရ အတူနေထိုင် လုပ်ကိုင်ဖြစ်ကြတာဆိုတော့ ပေါင်းရသင်းရတာ တော်တော်လေး ခက်တတ်တဲ့ သဘောရှိတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ စတွေ့ကာစတော့ အဆင်ပြေသလို ရှိကြပေမယ့် ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိလာ၊ တစ်ယောက်အကျင့်စရိုက်ကို တစ်ယောက်ကသိလာပြီး မတူညီတဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကြောင့် အတူနေရင်း၊ ပေါင်းရင်းသင်းရင်းနဲ့ပဲ ပိုပြီးချစ်ခင် ရင်းနှီးမှု မရှိတဲ့အပြင် တဖြည်းဖြည်းပိုပိုလို့သာ ဆက်ဆံရေးတွေက မကောင်းဘဲ ဖြစ်လာတတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ အစာမကြေတာလေးတွေပါ ရှိလာပြန်တော့ အဲဒီ အစာမကြေတာလေးတွေကို စုထားစုထားရင်း ကြာတော့အစိုင်အခဲ ဖြစ်လာကာ ပေါက်ကွဲကုန်တဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ဒီလို ပေါက်ကွဲကုန်တဲ့အထိ ဖြစ်လာစေတဲ့ အဓိက တရားခံကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ ရှိနေကြတဲ့ အစာမကြေတာတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစာမကြေတာကို စာစကားနဲ့ပြောတော့ အမျက်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပါဠိစာပေကတော့ ကောဓလို့ ဆိုပါတယ်။ ကောဓပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမျက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစာမကြေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီသဘောတရားတွေ လူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ စိတ်ထဲ၊ ရင်ထဲမှာ ကိန်းနေကြမယ် ဆိုရင်တော့ အစာမကြေတာတွေ များလာပြီး နောက်ဆုံး ပေါက်ကွဲလာတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကောဓဆိုတာ ဒေါသ အသေးစားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောဓလေးတွေ များများလာပြီး စုစည်းလာတဲ့အခါ အစိုင်အခဲ တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ပေါက်ကွဲတဲ့ ဒေါသအဆင့်အထိ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒေါသအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုး မခွဲခြားနိုင်တော့ဘဲ အမှားများစွာကို ကျူးလွန်မိတဲ့အထိ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောဓခေါ် အစာမကြေတာလေးတွေ မဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့လောကအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ နေနေကြတဲ့ သူတွေအတွက် နေ့စဉ်တွေ့ထိ ဆက်ဆံနေရတဲ့ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ကိုယ်အမူအရာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စကားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် နားလည်မှုလွဲတာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလို နားလည်မှုလွဲတာလေးတွေ ဖြစ်လာရင် တိုက်ရိုက်ပြောဆို ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ နားလည်မှု လွဲတာလေးတွေကို မဖြေရှင်းပဲ စိတ်ထဲမှာ တေးတေးထားရင် အဲဒီနားလည်မှု လွဲတာလေးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း များများလာပြီး အစာမကြေ ဖြစ်လာတာတွေအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစာမကြေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကြားမှာ နေထိုင်ပြောဆို ဆက်ဆံရတာတွေကအစ ကသိကအောင့် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အစာမကြေ ဖြစ်တာတွေဟာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အပြောအဆို အနေအထိုင်လေးတွေကြောင့် ပိုပိုများများလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်တဲ့အထိ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အစာမကြေဖြစ်လာ၊ အဆင်မပြေဖြစ်လာပြီဆိုရင် တစ်ဘက်လူ ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ကိုစောင်းပြီး လုပ်နေပြောနေတယ်လို့ကို ထင်လာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့ အစာမကြေမှုတွေ၊ အမျက်တွေက လူတစ်ယောက်ကို အကောင်းမြင်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အထိ ပိတ်ဆို့ထားတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းမမြင်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ သူဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ မဟုတ်တာတွေပဲ ထင်နေမြင်နေ တတ်ပါတော့တယ်။ ဒါဟာ နားလည်မှုလွဲရာက စခဲ့တဲ့ အစာမကြေမှုတွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘယ်သူမဆို အမှားလေးတွေ လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စေတနာမပါဘဲ ရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အလွဲအချော်လေးတွေ၊ အပြောမှား၊ အလုပ်မှားလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရှိလာတဲ့အခါ သူသူကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်ချင်စာတရားနဲ့ နားလည်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သူ့နေရာမှာ ကိုယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုဖြစ်မိမှာပဲလို့ သူ့နေရာကနေ အစားထိုး တွေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ သူမှားသလို ကိုယ်လည်း မှားဖူးတတ်တာလေးတွေကို သတိရပြီး ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ နားလည်မှုပေးနိုင်အောင် အားထုတ်သင့်ပါတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲ မှားတတ်တဲ့အပေါ်မှာ အပြစ်တွေပဲ မြင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ကြာရင်တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကြား အစာမကြေမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က အစာမကြေဖြစ်လာရင် တစ်ဘက်ကလည်း ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံး အစာမကြေတာတွေများပြီး နောက်ဆုံးမှာ မခေါ်မပြောနိုင်၊ မမြင်မကြည့်နိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်လာကာ အမုန်းကြီးမုန်းတဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အသေးအဖွဲ့ နားလည်မှုလွဲတာလေးက စခဲ့တဲ့ ပြဿနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာမကြေ ဖြစ်ကြရခြင်းရဲ့ အကြောင်းဖြစ်တဲ့ နားလည်မှု လွဲတာလေးတွေကို ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြဖို့ ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကြားမှာ နားလည်မှုက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ နားလည်မှုမရှိရင်၊ နားလည်မှု မပေးနိုင်ရင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အကြာကြီး ဆက်ဆံလို့ မရကြပါဘူး။ (Love is understanding) အချစ်ဆိုတာ နားလည်ခြင်းပဲလို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း နားလည်မှု မရှိရင် ချစ်လို့လည်း မရပါဘူး။ အချစ်မရှိရင် အပြစ်ပဲ ကြည့်တတ်ပါတယ်။ အပြစ်ကြည့်ပြီဆိုရင်တော့ နားလည်မှုလည်း ပေးလို့မရ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ အချစ်ကြီးတယ်ပဲ ပြောပြော နားလည်မှုလွဲလာပြီဆိုရင် အချစ်တွေလည်း လျော့လာတတ်ပါတယ်။ နားလည် ပေးခြင်းဟာ ချစ်နေခြင်းပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အချစ်ရှည်ချင်ရင် နားလည်မှုလည်း ရှည်အောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ နားလည်မှုရှည်ဖို့အတွက် နားလည်မှု ပေးဖို့လိုပါတယ်။ နားလည်မှုရအောင် လုပ်ယူဖို့လိုပါတယ်။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် နားလည်မှုလွဲစရာ ပေါ်လာရင် တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံပြီး ဒီလိုကြားတယ်၊ ဒီလိုပြောကြတယ် အဲဒါဟုတ်လား၊ မဟုတ်ဘူးလား စသဖြင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး အဖြေမှန်ကို ရယူနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း နားလည်မှုကို ရေရှည်တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အချင်းချင်း တိုက်ရိုက်မမေးမြန်း၊ မဖြေရှင်းဘဲ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်အကြားနဲ့ စိတ်ထဲမှာ တေးမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အစာမကြေမှု စလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစာမကြေဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ ကွဲကြပြဲကြဖို့ စလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာမကြေမှုတွေ မဖြစ်ရအောင် နားလည်မှုရှိကြဖို့၊ နားလည်မှု ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စကားစပ်လို့ သိပ်ချစ်ခင်ကြတဲ့ တပည့်ဒကာလေး နှစ်ယောက်အကြောင်း သတိရမိပါတယ်။ သူတို့ဟာ အရင်တုန်းက အတော်ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ ဘယ်သွားသွား ဘယ်လာလာ အတူတူ တစ်တွဲတွဲ ဖြစ်နေကြလို့ ဘေးကလူတွေကတောင် သူတို့ကို လင်မယားတွေလို့ ပြောကြတဲ့အထိ ချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ ခုတော့ ဒီဒကာနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမုန်းကြီးမုန်းပြီး ရန်သူတွေလို ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ဒီလိုဖြစ်သွားရခြင်းရဲ့ အကြောင်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုလွဲရာက စခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီလို နားလည်မှု လွဲတာလေးအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းရမှာကို အရမ်းရင်းနှီးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း မေးလို့မကောင်းပါဘူး၊ ပြောလို့မကောင်းပါဘူး ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ မဖြေရှင်းပဲ ထားရင်းထားရင်းနဲ့ ကြာတော့ ဘေးကတိုက်တာတွေရော၊ ဟိုလူကပြော ဒီလူကပြောတာ တွေရောကြောင့် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် အမြင်တွေစောင်းပြီး အစာမကြေတာတွေပါ အောင်းလာကာ နောက်ဆုံးတော့ ပေါင်းလို့မရတဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတို့လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းပေး၊ ညှိပေးပေမယ့် သူတို့ တစ်ဦးချင်းမှာရှိနေတဲ့ ငါဆိုတဲ့ အတ္တမာနတွေကြောင့် ဘယ်လို့မှ ညှိလို့မရဖြစ်ကာ ကွဲကြပြဲကြတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးရဲ့ အဓိကတရားခံကတော့ နားလည်မှုလွဲတာရယ် အစာမကြေတာတွေရယ်က စခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေရာမှာ အဓိကပြောချင်တာက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြား အစာမကြေ မဖြစ်ရအောင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ နားလည်မှုပေးကြဖို့ ပြောလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစာမကြေမှုတွေ များလာရင် အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ အတူနေမှုတွေမှာ မပြေမလည်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် နားလည်မှု လွဲတာလေးတွေကို တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် ပြေလည်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ဆောင်မှုမပါ ရိုးသားစွာနဲ့ပဲ အတူနေတဲ့ သူအချင်းချင်း နားလည်မှုကို တည်ဆောက်ကာ အစာမကြေမှုတွေ ဖျောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အစာမကြေတာတွေ များလာခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံး အကျိုးယုတ်မှုကိုသာ ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက် တဒင်္ဂခဏ တွေ့ဆုံရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အစာမကြေမှုတွေနဲ့ အမျက်လေးတွေ မဖြစ်ကြစေဖို့ အသေးအဖွဲ နားလည်မှု လွဲတာလေးတွေကအစ သူများစကား နားမယောင်ဘဲ ကိုယ့်အချင်းချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ ပြောဆိုခြင်းဖြင့် နားလည်မှုရအောင် တည်ဆောက်ကြဖို့ စေတနာစကား မေတ္တာအားဖြင့် တိုက်တွန်းသမှု ပြုလိုက်ရပါတော့တယ်။ အားလုံး အစာကြေနိုင်ကြပါစေ…
မှတ်ချက်။ ဤပို့စ်လေးသည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်ခန့်က တင်ခဲ့ပြီးသည့် ပို့စ်လေးဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်အရ ထက်မံဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Facebook က အမေးတစ်ပုဒ် (၆)
။ အချိန် 10/02/2011 07:31:00 AM
Aye Mya Mya Moe
မေး။ အရှင်ဘုရား သိချင်တာလေတခုရှိလို့ပါဘုရား။
မိုးညှင်းသမ္ဗုဒ္ဓေ ကိုအလုံး 1000 ပုတီးစိပ်ရင် ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား။
ဖြေ။ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးပေးချိန်နဲ့ တောင်းဆုပြုထားမှု တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့သွားတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘုရားကိုသွားပြီး ဒီလို ပုတီးစိပ်တိုင်း ဆုတောင်းပြည့်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုဆိုတာ ပြုလုပ်တဲ့သူနဲ့ အကျိုးပေးချိန် တိုက်ဆိုင်မှ၊ အကျိုးပေးခွင့်သာမှ အကျိုးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးပေးချိန် မတန်သေးရင် ကောင်းတာတွေ လုပ်နေပေမယ့် မကောင်းတာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတတ်ပြီး မကောင်းတာတွေ လုပ်နေသူတွေလည်း ကောင်းတာလေးတွေ ကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ ဒါက ကောင်းမှုမကောင်းမှု အကျိုးပေးချိန် မတန်သေးလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကံဆိုတာ များများလုပ်ပေးနိုင်လေ ကံကောင်းမှုတွေ များများရောက်လာလေဖြစ်ပြီး ကံကောင်းမှုကြောင့် ကောင်းကျိုးတွေ များများရောက်လာတာဟာ ဆုတောင်းပြည့်တာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဆုတောင်းပြည့်တာ မပြည့်တာ ကံရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာက ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သီလကိုအခြေခံတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုသာ များများလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
မေး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ မေတ္တာကိုဘယ်လိုပို့ရမလဲ ပြောပြပါလားဘုရား။ တပည်တော်မ အလုပ်ရှာဖို့ ဘယ်လိုပို့ရမလဲမသိ ဖြစ်နေလို့ပါဘုရား။ ဒီမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့နေရာ ၄ ၅ ခုကို ရှာမှာဆိုတော့ မေတ္တာပို့ရအောင်လည်း နေရာအတိအကျ မသိဘူး။ အလုပ်ရှင်လဲ အတိအကျမသိတော့ ဘယ်လိုပို့ရမလဲ မသိဘူးဖြစ်နေလို့ပါဘုရား။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ရှင်းပြပေးပါအုံးဘုရား။
ဖြေ။ မေတ္တာပို့ရမယ့် နေရာနဲ့ မေတ္တာပို့ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို အတိအကျ မသိပေမယ့် အလုပ်ရှာဖို့ မသွားခင် ဒါမှမဟုတ် သွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီကို သွားမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်စဉ်းစားထားပြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချိန်မှာ ကိုယ်သွားမယ့် ကုမ္ပဏီရှိရာ နေရာဒေသဝန်းကျင်ရှိ သမ္မာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်များနဲ့ သူတော်ကောင်းများ၊ ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်များနဲ့ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ ကိုယ်နဲ့ရှေးရှေးဘဝ တစ်ခုခုက ပတ်သက်ဆက်နွယ်ဖူးသူများ စသဖြင့် မြင်ဖူးတွေ့ဖူးခြင်း မရှိပေမယ့် စိတ်ကမှန်းပြီး စေတနာအမှန်နဲ့ မေတ္တာပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ မမြင်ဖူး၊ မရောက်ဖူးပေမယ့် အမည်ပညတ် သဘောအားဖြင့် ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီ၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဘယ်ဝန်ထမ်းစတာတွေဆိုတာ အမှန်တကယ် ရှိနေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလို အမည်ပညတ်ရှိနေတာတွေကိုပဲ စိတ်ကမှန်းပြီး ပို့သပေးလို့ ရပါတယ်။ မျက်နှာအသွင်အပြင်နဲ့ ပုံရိပ်ကို တိုက်ရိုက်မမြင်နိုင်ပေမယ့် အမည်ပညတ်တွေနဲ့ မှန်းပြီးပို့သပေးလို့ ရပါတယ်။
ဥပမာ အလုပ်သွားရှာမယ့်နေရာကို စရောက်ရောက်ချင်း “ဤအရပ်ဤဒေသဤဝန်းကျင်၌ ရှိကြကုန်သော သမ္မာဒေဝ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များနဲ့တကွ အားလုံးသော သူတော်ကောင်းအပေါင်း မြင်အပ်မမြင်အပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအပေါင်းကို ကိုယ်နဲ့တစ်သားတည်းထားပြီး ဘေးရန်ကင်းပါစေ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းပါစေ၊ ချမ်းသာစွာ မိမိခန္ဓာဝန်ကို ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေ” စသဖြင့် ပို့သပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူစိတ်ထားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာက ကိုယ်ဘေးရန်ကင်းချင်သလို သူတို့လည်းကင်းပါစေ၊ ကိုယ်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းချင်သလို သူတို့လည်း ကင်းပါစေ၊ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းချင်သလို သူတို့လည်း ကင်းပါစေ စသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ပြီး စေတနာထားကြည့်စေချင်တဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ နေရာအတိအကျ ကြိုတင်သိထားရင်တော့ အဲဒီနေရာကို စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီး အကြိမ်ကြိမ် မေတ္တာပို့ထားပေးလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကို သွားတဲ့အခါ သွားမယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ အမည်နဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဤကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လျက်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များစသဖြင့် အားလုံးကို စိတ်ကမှန်းပြီး ခုနပြောသလို မေတ္တာပို့ပေးလို့ ရပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ တစ်ခုခုကို လိုချင်လို့ မေတ္တာပို့တဲ့ သဘောသက်ရောက်ပေမယ့် မေတ္တာပို့တဲ့အခိုက်မှာတော့ စိတ်မှာ မျှော်လင့်ချက်အကင်းဆုံးနဲ့ တကယ်ချမ်းသာစေလိုတဲ့ စိတ်စေတနာ သက်သက်နဲ့ မေတ္တာပို့နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ လိုချင်တာရှိလို့ မေတ္တာပို့ပေးတဲ့ သဘောဆိုရင်တော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုက ထင်သလောက် မဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေတ္တာပို့တဲ့အခိုက်မှာတော့ စိတ်ကိုအသန့်ရှင်းဆုံးထားပြီး အရိုးရှင်းဆုံးအာရုံပြုမှုနဲ့ ပို့သပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ကိလေသာပယ်ခွါရေးနှင့် သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်
။ အချိန် 9/30/2011 09:14:00 AM
ကိလေသာဟူသည် ပူလောင်ခြင်း၊ လောင်မြိုက်ခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်း၊ ညစ်နွမ်းခြင်း သဘောရှိ၏။ ကိလေသာတရားများဖြင့် လောင်မြိုက်ခံရသည့် သတ္တဝါများသည် စိတ်အစဉ်ပူလောင်မှု၊ ပူဆွေးမှု၊ စိတ်မချမ်းသာမှုကိုသာ ဖြစ်စေ၏။ သတ္တဝါအများအား လောင်မြိုက်စေ၊ ပူလောင်စေ၊ ညစ်နွမ်းစေသည့် ထိုကိလေသာ တရားများသည် အကျဉ်းအားဖြင့် (၁၀)ပါးရှိ၏။ ထိုကိလေသာဆယ်ပါးမှာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ၊ ထိန၊ ဥဒ္ဓစ္စ၊ အဟိရိက၊ အနောတ္တပ္ပဟူသော တရားဆယ်ပါးပင်ဖြစ်၏။ မိမိသန္တာန်တွင် လိုချင်မှုများနေလျှင်၊ စိတ်ဆိုးစိတ်တိုခြင်း စသည့် ဒေါသတရားများနေလျှင်၊ အမှားအမှန်၊ အကြောင်းအကျိုး၊ ကုသိုလ်အကုသိုလ် စသည်ကို မခွဲခြားနိုင်သည့် မောဟတရား အားကြီးနေလျှင်၊ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးတတ်သည့် မာနတရား အရှိများနေလျှင်၊ အယူအဆလွဲမှားနေလျှင်၊ ရတနာသုံးပါးနှင့် ကံကံ၏ အကျိုးတရားများတွင် သို့လောသို့လော သံသယများ တိုးပွားနေလျှင်၊ တက်ကြွမှုမရှိ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေ ပျင်းရိခြင်း များနေလျှင်၊ တည်ငြိမ်မှုမရှိ ပြန့်လွှင့်ခြင်းသာ ရှိနေလျှင်၊ မကောင်းမှုအကုသိုလ် လုပ်ရမည်ကို မရှက်ခြင်း၊ မကြောက်ခြင်း သဘောများသာ အဖြစ်များနေလျှင် ထိုသူသည် ကိလေသာတရားများ၏ လောင်ကျွမ်းခြင်းကို ခံနေရခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ထိုသူ၏ စိတ်အစဉ်သည် ကြည်လင်ခြင်းမရှိ ညစ်နွမ်းမှုကိုသာ ဖြစ်နေပေ၏။ ထို့ကြောင့် ပူလောင်ညစ်နွမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည့် ထိုကိလေသာ တရားများကို ပယ်ခွါနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏။
ကိလေသာတရားများကို ပယ်ရမည်ဟုဆိုရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ကိလေသာတရားကို အကြမ်းစားကိလေသာ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား ကိလေသာ၊ အနုစားကိလေသာဟူ၍ အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြား နားလည်ကာ ထိုကိလေသာ အဆင့်အတန်းအလိုက် ဆိုင်ရာအကျင့်တရားများဖြင့် စွမ်းနိုင်သမျှ ပယ်ခွာကြည့်ရမည်သာ ဖြစ်၏။ ထို့သို့ပယ်ခွာရာတွင် သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်ကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်၏။ သိက္ခာသုံးရပ်ဟူသည် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟူသည့် အမြတ်တရား သုံးပါးပင်ဖြစ်၏။ ကိလေသာတရားများတွင် အကြမ်းစား ကိလေသာများကို သီလအကျင့်တရား၊ အလတ်စားကိလေသာများကို သမာဓိအကျင့်တရား၊ အနုစားကိလေသာများကို ပညာအကျင့်တရားများဖြင့် ပယ်ခွါကြရမည်သာ ဖြစ်၏။ ကိလေသာမှန်သမျှ အကုန်မကျန်ရအောင် ပယ်ခွာရေးသည် အရိယာတို့၏ မဂ်ဖိုလ်ဉာဏ်ပညာဖြင့်သာ ပယ်ခွာနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခု၊ အဆင့်အတန်း တစ်ခုအနေဖြင့် ပယ်ခွာနိုင်ရန်အတွက်ကား သီလအကျင့်၊ သမာဓိအကျင့်များဖြင့်လည်း ပယ်ခွာထားနိုင်ကြမည် ဖြစ်၏။
မှန်၏။ ကိုယ်ကျင့်သီလကို လုံအောင်ထိမ်းထားခြင်းအားဖြင့် လောဘ၊ ဒေါသစသည့် ကိလေသာကြမ်းများကို အကြောင်းပြုကာ ကာယကံမြောက်၊ ဝစီကံမြောက် ကျူးလွန်မှုကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် မကောင်းမှုများအား မလုပ်ဖြစ်တော့ပေ။ အကယ်၍ သီလမစောင့်ထိမ်းမိပါက လောဘ၊ ဒေါသစသည့် ကိလေသာများ အားကြီးလာလျှင် အသိတရားပျောက်ကာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုများအထိ ဖြစ်ပေါ်တတ်၏။ လောဘအလျောက်၊ ဒေါသအလျောက် လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်လိုက်မိတတ်၏။ ထင်ရှားကြမ်းတမ်းသည့် ကိလေသာကြမ်းများကို အမှီပြု၍ မကောင်းသည့် ဒုစရိုက်အမှုများကို အဆုံးစွန်အထိ ကျူးလွန်မိတတ်၏။ အကျင့်သီလကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းထားသူများကား ထိုလောဘဒေါသ စသည့်ကိလေသာများကြောင့် ကံမြောက်သည်အထိ ကျူးလွန်မှုကို မပြုဖြစ်တော့ပေ။ ဤသည်မှာ သီလသိက္ခာအကျင့်က ကိလေသာကြမ်းများကို အထိုက်အလျောက် ပယ်ခွာပေးထားခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။
ကာယကံမြောက်၊ ဝစီကံမြောက် ကျူးလွန်စေတတ်သည့် ကိလေသာ တရားများမဟုတ်ဘဲ စိတ်ထဲတွင် တနုံ့နုံ့ဖြစ်နေသည့် ကိလေသာများ၊ စိတ်အတွေးအကြံများများတွင် မကြာမကြာ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကိလေသာများ၊ မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှ အာရုံများတွင် တစ်ထပ်တည်း လိုက်ပြီးစွဲလမ်းကာ ခံစားနေရသည့် ကိလေသာများ စသည်များကိုကား သမာဓိအကျင့်ဖြင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ပယ်ခွာထားနိုင်မည်သာ ဖြစ်၏။ သမာဓိအကျင့် တစ်ခုခုကျင့်ပွားခြင်းဖြင့် ထိုအလတ်တန်းစားဖြစ်သည့် ကိလေသာများကို အချိန်အတော်ကြာကြာ ပယ်ခွါထားနိုင်မည်သာ ဖြစ်၏။ သမာဓိအကျင့် အားကောင်းနေသည်နှင့်အမျှ ကိလေသာတရားများကိုလည်း အလွယ်တကူ ပေါ်မလာနိုင်အောင် ပယ်ခွာထားနိုင်မည် ဖြစ်၏။ သမာဓိအကျင့်သည့် ကိလေသာတရားကို အကြွင်းမရှိ ပယ်သတ်နိုင်သည့် အကျင့်မဟုတ်သော်လည်း သမာဓိအားကောင်းနေသမျှ ကိလေသာအားများ လျော့နေမည်ကား အမှန်ပင် ဖြစ်ပါ၏။ သီလအားသည် ကိလေသာကြမ်းများကို အမှီပြု၍ ကာယကံမြောက်၊ ဝစီကံမြောက် ကျူးလွန်နိုင်သည့် အပြစ်များကို ပယ်ခွာထားနိုင်သကဲ့သို့ သမာဓိအားသည်လည်း ကိလေသာတရားကြောင့် အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်နေတတ်သည့် စိတ်အကြံအတွေးများ၊ အပြစ်များကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ပယ်ခွာထားနိုင်မည်သာ ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော် ကိလေသာတရားများ အကြွင်းမရှိ ပယ်ခွာနိုင်ခြင်းကား မဟုတ်လှပေ။
ကိလေသာမှန်သမျှ အလွန်သိမ်မွေ့လှသည့် ကိလေသာများပါမကျန် အကုန်အစင် ပယ်သတ်နိုင်ရန်မှာကား ပညာတရားဖြင့်သာ ပယ်ခွာနိုင်မည် ဖြစ်၏။ သိက္ခာသုံးရပ်တွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် ပညာသိက္ခာသည် ကိလေသာတရားများကို အသေးအဖွဲ့လေးမှစ၍ အကြွင်းမရှိ ပယ်သတ်နိုင်သည့် အကျင့်မြတ်ပင် ဖြစ်၏။ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင် အားထုတ်ထားသည့် သတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ဖြင့် ရရှိလာသည့် ထိုပညာသိက္ခာသည် သတ္တဝါများအား ပူလောင်စေသည့် ကိလေသာမှန်သမျှ ကိလေသာဟု မထင်ရလောက်အောင် နူးညံ့သိမ်မွေ့လှသည့် ကိလေသာများမှစ၍ အားလုံးကို ပယ်ခွာထားနိုင်၊ ပယ်သတ်သွားနိုင်သည့် အကျင့်သိက္ခာမြတ်ပင် ဖြစ်၏။ ပညာသိက္ခာ၏ ကိလေသာကို ပယ်ခွာမှုသည် အခိုက်အတန့် ပယ်ခွာမှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ မည်သည့်အချိန်တွင်မျှ ပေါ်လာမှု မရှိအောင် ပယ်ခွာခြင်းမျိုးဖြစ်သဖြင့် နောက်ဆုံးဖြစ်သည့် အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်ဟုခေါ်သည့် ပညာဉာဏ်ကို ရရှိသွားသူသည် ဘဝသံသရာလည်း ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကာ နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုသွားသည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
ဤသို့ဆိုသော် ကိလေသာမှန်သမျှ အကြမ်းအနုမှစ၍ အားလုံးကို ပယ်ခွာနိုင်၊ ပယ်သတ်နိုင်ရန်အတွက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်တရားများကို လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးကြရမည်မှာ အလွန်ထင်ရှားလှပေ၏။ သီလအကျင့်တစ်ခု၊ သမာဓိအကျင့်တည်းဖြင့် ကိလေသာအားလုံးကို အကုန်အစင် မပယ်သတ်နိုင်သော်လည်း သီလလုံနေခြင်းအားဖြင့် ကာယကံမြောက်၊ ဝစီကံမြောက် ကျူးလွန်နိုင်သည့် ကိလေသာကြမ်းများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပယ်ခွာထားနိုင်ပြီး သမာဓိအကျင့်အားဖြင့်လည်း စိတ်အစဉ်တွင် အမြဲမပြတ် ပူလောင်စေတတ်သည့် ကိလေသာတရားများကို သမာဓိအားကိုလိုက်ကာ အတော်ကြာကြာ ပယ်ခွာထားနိုင်ကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါ၏။ ထိုသီလ၊ သမာဓိ အကျင့်တရားကို အခြေပြု၍ ပယ်ခွာထားသည့် ကိလေသာတရားများကို နောက်ထပ်တစ်ဖန် မည်သည့်အခါမျှ မပေါ်စေရန်အတွက်ကား ပညာအား၊ အထူးသဖြင့် ဝိပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ကို ကျင့်ကြံသဖြင့် ရရှိလာသည့် ဝိပဿနာ ဉာဏ်ပညာအားဖြင့် အကုန်အစင် ပယ်ခွာနိုင်မည်မှာ ယုံမှားဖွယ် မရှိလှပေ။ အရင်းစစ်သော် ထိုသိက္ခာသုံးရပ်သည် ကိလေသာ အမျိုးအမျိုးကို အဆုံးစွန်အထိ ပယ်ခွာနိုင်မည့် အကောင်းဆုံးသော အကျင့်မြတ်ဖြစ်သည်ဟူသည့် အချက်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
ဆိုလိုသည်မှာ “ပူလောင်မှု ကိလေသာတရားများဖြင့် အမြဲမပြတ် နှိပ်စက်ခံနေရသည့် သတ္တဝါများအား ထိုကိလေသာတရားများမှ ပယ်ခွာနိုင်ရေးသည် ပူလောင်မှုကို အေးပေးစေသည့် တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်သည့် အကျင့်မြတ်မှာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟူသည့် သိက္ခာသုံးပါး အကျင့်းတရားများပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်ဖြင့် အကြမ်းစားကိလေသာ၊ အလတ်စားကိလေသာ၊ အနုစားကိလေသာများကို တစ်စတစ်စ ပယ်သတ်ကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သိက္ခာသုံးရပ်တွင် သီလသိက္ခာသည် ကာယကံမြောက်၊ ဝစီကံမြောက် ကျူးလွန်မှုအထိ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အကြမ်းစား ကိလေသာများကို အတိုင်အတာတစ်ခုအထိ ပယ်ခွာပေးနိုင်ပြီး သမာဓိသိက္ခာသည် စိတ်အစဉ်တွင် အမြဲမပြတ် ပူလောင်စေတတ်သည့် မနောကံမြောက် ကျူးလွန်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အလတ်စားကိလေသာများကို သမာဓိအားသို့လိုက်ကာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပယ်ခွာထားနိုင်မှုကို ဖြစ်စေကာ ပညာသိက္ခာသည်ကား အနုစားကိလေသာများမှစ၍ မည်သို့သော ကိလေသာများကိုမဆို အကြွင်းအကျန်မရှိ အကုန်အစင် ပယ်သတ်စေမှုကို ဖြစ်စေကြောင်း” စသည်ဖြင့် ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ထို့ကြောင့် ဘဝတွင် ကိလေသာ အပူမီးများကြောင့် အမြဲမပြတ် စိတ်ပျက်မှုကို ဖြစ်နေကြသည့် သတ္တဝါများအနေဖြင့် မည်သူမဆို မိမိတို့၏ ဘဝထဲမှ ကိလေသာအလွဲများကို ပယ်ခွာလိုပါက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်ဖြင့်သာ ဆိုင်ရာအကျင့်တရားဖြင့် ဆိုင်ရာကိလေသာများကို ပယ်ခွာနိုင်အောင် ကြိုးစားရင်း ကိလေသာမှန်သမျှ အကြွင်းအကျန်မရှိ အကုန်အစင် ပယ်သတ်နိုင်မည့် ပညာဉာဏ်များ ရင့်သန်လာသည်အထိ သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်ကို တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် မြတ်သထက်မြင့်အောင်သာ ကြိုးစားကြပါဟု အသိပေး တိုက်တွန်းသမှု ပြုလိုက်ရပါသည်။
ဓမ္မစကား၊ နေ့တိုင်းကြားက၊ စိတ်ထားဖွေးလက်၊ သိဉာဏ်ထက်၏။
ဘဝခွန်အား ဒဿနစာစုများ (1)
လစဉ်ဟောကြား မြတ်တရား (5)
သမထ၊ ၀ိပဿနာဆိုင်ရာများ (18)
မေးဖြေပြီးသမျှ [Q / A] (96)
ပဝါရဏာက ပေးတဲ့မက်စေ့ခ်ျ (message) (သို့) ပဝါရဏာပြု...
သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ (သို့) အနှစ်သ...
Dhamma donwload (ဆရာစုံ တရားစုံနာရန်)
Mandalay to Bagan Boat
Cycling tour in Myanmar
Myanmar Embassy in Korea
Copyright © 2011 " မနာပဒါယီ ". All Rights Reserved.
Donated by MWD,aMyanmar Web Design Company